NYI LYNN SECK 18+ DEN: May 2009
ပထမတော့ အားဒမ်သည် မရိပ်မိသေးချေ။ ဒညင်းမယ်လေးကို ကြည့်လိုက်တိုင်း ရေကန်ထဲ ဆင်းဆင်းနေသည်ကိုသာ တွေ့ရသည်။ သူစကားလှမ်းပြောသည်ကိုပင် ပြန်မပြော။ အေးမကလည်း ထူးထူးဆန်းဆန်း ခုတလောမှ ဒညင်းမယ်လေးနှင့် ပတ်သက်သမျှ ဘာပြသဿသနာမှ မလုပ်ချေ။ ထိုသို့သာ အမြဲတမ်း အေးအေးချမ်းချမ်းဆိုလျှင် ဘယ်လောက်များ ကောင်းလိမ့်မလဲ။ အခုတော့ အေးမ ပြသဿသနာ မရှာတော့သော အခါမှ ဒညင်းမယ်လေးက သူ့ကို ရှောင်နေလေပြီ။ သူ့စိတ်သည် မရိုးမရွ ဖြစ်လာ၏။ ခါတိုင်းမြင်နေကျ စကဿခုအာရုံလေး မမြင်တွေ့ရတော့သဖြင့်လည်း ခြေဖဝါးကို ဓါးနှင့်ခွဲ ဆားပက်ပြီးမှ မီးကင်ခံရရှာသော ဗိမဿမသာရမင်းကြီးလို ခံစားရလေသည်။ သူ့အပှေါကို တစ်ခုခုများ ငြိုငြင်နေသလားလို့ အပြန်ပြန် အလှန်လှန် စဉ်းစားကြည့်ရှာ၏။ အေးမနှင့် အမြဲတမ်း ဒီလိုကြီး ပူးတွဲပူးတွဲ လုပ်နေလို့များ အမျက်သိုလေသလားလို့လည်း စေ့စေ့ပေါက်ပေါက် တွေးမိလေ၏။ ဤသို့ ဆိုလျှင်တော့ သူ့အနေဖြင့် ဘယ်လိုမှ မတတ်နိုင်။ ဘုရားသခင် စီစဉ်ထားသည်ကိုး။ ဒါဆိုရင် ဘာကြောင့် ဒညင်းမယ်လေး သူ့ကို သိသိသာသာကြီး ရှောင်နေရသနည်း။ ဤသို့ဖြင့် အခါမလပ် အားဒမ်၏ စိတ်တွင် ယင်းအတွေးများ ဝင်နေလေရာ အိပ်ပျှောနေလျှင်တောင်မှ ဒညင်း၊ ဒညင်းဟု ရေရွတ်သည်အထိ ဖြစ်လာသည်။ (နောင်သောအခါ အားဒမ် အိပ်ပျှောနေစဉ် တွေးနေသော ဒညင်းဒညင်းကို Dream Dream ဟု ခှေါကြလေသည်)။
တစ်ရက်တော့ သူအေးမကို အဘယ်ကြောင့် ဒညင်းမယ်လေး သူတို့နှင့် မနေဘဲ ရေကန်ထဲ ဆင်းဆင်းနေသည့် အကြောင်းကို တီးခေါက်လေ၏။ အေးမကတော့ အမူအရာမပျက်ဘဲ အို.. ဒါကတော့ရှင် ရှင်နဲ့ ကျွန်မကြားထဲ သူဝင်ပြီး ခလောက်ဆန်မိတာ သိသွားလို့ နောင်တရပြီး ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေတာဖြစ်မှာပေါ့လို့ ဆိုလေ၏။ ဒီကောင်မ မရှိတာ ဘာအရေးများလဲ.. ကျွန်မတစ်ယောက်လုံး ရှိပါသေးတယ်ရှင့်.. အရင်ထဲက အားဒမ်ရဲ့ မူပိုင်က အေးမဆိုတာ အားလုံး အားလုံး သိကြတာပဲ.. ရှင်ကလဲ ကျွန်မကိုပဲ ချစ်တယ် ချစ်တယ် တတွတ်တွတ် ပြောနေပြီးမှ ဘာအခုမှ ဒညင်းမယ်အတွက် ပူပန်နေရတာလဲ ဟု မျက်တောင်လေးချီကာ ပြောလိုက်သေးသည်။ ပြီးတော့ သူ့ရင်အုပ်ကျယ်ကြီးကို ခေါင်းအပ်ပြီး အတင်းဖက်ထားပြန်သည်။ အရင်ကတော့ ဒီလို အချိန်လေးတွေဟာ သာယာသည်ပေါ့။ ယခုအခါတွင်တော့ စိတ်ညစ်စရာ ဖြစ်နေပေပြီ။
အားဒမ်သည် အတင်းဖက်တွယ်နေသော အေးမ၏ လက်များကို ခွါထုတ်လိုက်ပြီး လေပူတစ်ချက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း မှုတ်ထုတ်လိုက်၏။ ဒါကြောင့်လည်း မိန်းမတွေ ဉာဏ်နည်းတယ်လို့ ပြောတာနေမှာဟု တွေးလိုက်မိသည်။ စဉ်းစားကြည့်လျှင် ရေကြည့်လိုက်လျှင်တောင်မှ လက်ငါးချောင်း မပြည့်ချင်တဲ့ လူ့လောကကြီးထဲတွင် အားနွဲ့သူ မိန်းမသားလေး တစ်ယောက်တည်း သူတို့ကို ခွဲပြီး သွားနေတာ ဘယ်လောက် အထီးကျန်လိုက်မလဲ။ သူတောင်မှ ရေကန်ထဲ ကြာကြာမနေနိုင်၊ နှုတ်ခမ်းများ ပြာတက်ပြီး တကိုယ်လုံး တုန်ခါ လာတက်သည်။ ဒညင်းမယ်လေး တနေကုန် တနေခန်း ရေထဲမှာ နေနေတာ ဘယ်လောက် ချမ်းရှာလိမ့်မလဲ။ သူ့ခမျာ အေးမလို ဖက်ထားစရာ ယောက်ျားသားလည်း မရှိပြန်တာ ဘယ်လောက် သနားစရာ ကောင်းလိုက်သလဲ။ သူသာ ဒညင်းမယ်လေးနား ရှိလျှင်တော့ အနည်းဆုံး အကိုလို မောင်လို စိတ်မျိုးနဲ့ သူမ ဖက်ထားချင် ဖက်ထားလို့ ရသည်ပေါ့။ ဒီထက် ပိုဆိုးတာက အဲဒီရေကန်။ အဲဒီရေကန်မှာ မွေးဖွားရှင်သန်နေကြတဲ့ အကောင်တွေက အများကြီးရယ်။ သူတောင် ဟိုးတခါ ရေဆင်းချိုးတုန်းက လက်ကို ငါးတွတ်လို့ အမြန်ပြန်တက်ခဲ့ရဖူးသည်။ နောက်တကြိမ်တွင်တော့ မင်းသုဝဏ်၏ မျှော့နက်မည်းကြီး တွယ်လေ၏။ ဒီအနဿတရာယ်တွေကို ဒညင်းမယ်လေး သိမှ သိပါရဲ့လား။ အားဒမ်သည် တွေးမိလေ တွေးမိလေ ဒညင်းမယ်လေး၏ မျက်လုံးရွဲကြီးကိုလည်းကောင်း၊ ပါးနီနီလေးကိုလည်းကောင်း၊ ရှည်လျား သွယ်ပြောင်းသော လက်ချောင်းလေးများကိုလည်းကောင်း၊ တခစ်ခစ်ရယ်သံ လွင်လွင်လေးကိုလည်းကောင်း၊ စိတ်ကောက်လျှင် ထှောပြီး စူထားတတ်သော နှုတ်ခမ်းထူထူလေးကိုလည်းကောင်း မျက်လုံးထဲတွင် တရေးရေး မြင်ယောင်နေလေတော့သည်။
တနေ့။ ထိုနေ့သည်လည်း နေသာပြီး မိုးမရွာပါ။ လေပြေများက ဒဂုန်တာရာ ပြောသလို တနော့နော့ တိုက်နေပြီး အေးမသည် သစ်ပင်တစ်ပင်မှ တစ်ပင်သို့ ခုန်ကူးနေသော မျောက်များကိုကြည့်ကာ ဂျူးကဲ့သို့ ဘုရားရေ.. ဘုရားရေဟု အဆက်မပြတ် တနေ၏။ အားဒမ်သည် သူခူးလာသော သီဟိုဠ်စေ့ များကို မီးဖုတ်ပြီး ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အေးမကို ကျွေးနေ၏။ ထိုအစေ့များ များများစားလျှင် သွေးတက်ပြီး အလွန် အိပ်ပျှောတတ်ကြောင်း သူသိထားသည်။ မကြာမီပင် အေးမသည် မထူးခြားသော မြင်ကွင်းကြောင့်လည်းကောင်း သီဟိုဠ်စေ့ တန်ခိုးကြောင့်လည်းကောင်း သွေးတက်ပြီး ပျင်းရိလေးလံလာကာ နှစ်နှစ်ခြိုက်ခြိုက်ကြီး အိပ်ပျှောသွားလေတော့၏။ ထိုကဲ့သို့ အေးမ နှစ်ခြိုက်စွာ အိပ်ပျှောမည့် အချိန်ကို အားဒမ် စောင့်နေခဲ့သည်မှာ တှောတှောကြာခဲ့လေပြီ။ အခုလို အခွင့်ကောင်း ကြုံသည်နှင့် ရေကန်ရှိရာသို့ ပြေးတော့သည်။ သနားစရာ ဒညင်းမယ်လေးသည် ရေကန်ထဲမှ တဆတ်ဆတ်တုန်ကာ သူ့ကို ကြည့်နေလေ၏။ အားဒမ်သည် ရေထဲသို့ ဖြေးဖြေးဆင်းပြီး ဒညင်းမယ်လေးအနားသို့ တိုးကပ်သွားလေ၏။ ယခင်က ပြည့်ပြည့်ဖြိုးဖြိုး ကိုယ်ကာယကလေးမှာ ယခုအခါ အတှောချောင်ကျသွားပါလားဟု သူတွေးမိလိုက်သည်။ ဒညင်းမယ်လေးသည်လည်း သူဆင်းလာသော အခါမှ မျက်ရည်များ ပေါက်ပေါက်ပေါက်ပေါက် ကျလာကာ ရက်စက်လိုက်တာ ရက်စက်လိုက်တာဟု မြည်တမ်းလေသည်။ အားဒမ်သည် ဒညင်းမယ်လေးကို သူ၏ သန်မာသော လက်ကြီးဖြင့် ခနဿဓာကိုယ်အတွင်းသို့ နစ်ဝင်လုမတတ် ထွေးဖက်လိုက်ပြီး ဘာဖြစ်လို့ ကိုယ့်ကို ရှောင်နေရတာလဲကွယ်ဟု ကျှောဆွေ၏ လေသံဖြင့် မေးလေသည်။ ဒညင်းမယ်လေးသည် မျက်ရည်မပြတ်ဘဲ ညှိုးငယ်သော မျက်နှာလေးဖြင့် ဦးသမီးကို သေစေချင်နေတာ သမီးသိတယ်.. သမီးသိတယ်.. ဦးသိပ်ရက်စက်တယ် စသည်ဖြင့် တတွတ်တွတ် ပြောရင်းငို ငိုရင်းပြောလေ၏။
အားဒမ်သည် လက်နှစ်ဖက်ဖြင့် ဒညင်းမယ်လေး၏ မျက်နှာကို မော့လိုက်ပြီး အိုကွယ် မဟုတ်လိုက်တာ.. ကိုယ်မင်းကို ဘာများ အပြစ်လုပ်မိလို့လည်းကွယ်.. မင်းမရှိလို့ ကိုယ်အထီးကျန်နေတာ မင်းသိရဲ့လား ဘာညာဖြင့် ယောက်ျားတို့ တပ်အပ်သော အဋဿဌာရသဿသ များကို ဝမ်းတွင်းပါ တတ်ပြီးသည့်ပမာ စကားကို စီကာစဉ်ကာ ဖွဲ့ဖွဲ့နွဲ့နွဲ့ ပြောလေ၏။ ထိုကျမှ ဒညင်းမယ်လေးက ဖြစ်ကြောင်းကုန်စင်ကို ပြောပြလေသည်။ အားဒမ်သည် နားထောင်ရင်း နားထောင်ရင်း အေးမကို လည်ပင်းညှစ်သတ်ချင်စိတ် တဖွားဖွား ပှေါလာ၏။ ဒညင်းမယ်လေးကိုကား သနားပြီးရင်းသနား ရင်ခွင်မှာသာ အပ်ထားလိုက်ချင်တော့၏။ ဒညင်းမယ်လေးက သမီးသိပ်ကြောက်တာပဲ ဦးရယ် ဟုပြောပြီး ခေါင်းလေး မော့လိုက်သောအခါ အားဒမ်သည် မည်သို့ စိတ်ကူးပေါက်သွားသည်မသိ သူမ၏ နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးအား တရှိုက်မက်မက် နမ်းမိလေတော့သည်။ အေးမကိုပင် သူတစ်ခါမှ ဤသို့ မနမ်းစဖူး။ မနမ်းစဖူး အနမ်းထူးသောကြောင့် သူတို့နှစ်ဦးသားမှာ သဘာဝတရား၏ လျှို့ဝှက်ထားသော သဘောတရားကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီး ယင်းရေအလျဉ်တွင် တသွင်သွင်မျောပါကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို အမေ့ကြီး မေ့နေကြသည်။ ကန်ဘေးသစ်ပင်ထက်မှ မျောက်များက အုန်းသီးများကို ထုရိုက် အားပေးနေကြပြီး ခွေးများက အူသံပေးကာ ချီးယားလုပ်၏။ တောက်တဲ့က တောက်တဲ့တောက်တဲ့ မြည်သံကို အားဒမ်နားတွင် တှောတယ် တှောတယ်ဟု ကြား၏။ ဒေါင်းများက ကမဿဘာ့ဖလား ဘောလုံးပွဲ သီချင်းဖြစ်သော အိုဝေး..အို…ဝေး..အိုးဝေ ဟူသော အိုးဝေသီချင်းဖြင့် တပ်လှန့်၏။ အားဒမ်တွင် မျှော့သုံးကောင် တွယ်ကပ်နေပြီး၊ ဒညင်းမယ်လေးတွင်တော့ ရှစ်ကောင်ခန့် တွယ်ကပ်နေလေပြီ။ ထိုအခိုက် အေးမသည် အေးစက်သောရေ၏ အထိအတွေ့ကြောင့် မိန်းမော အိပ်ပျှောနေရာမှ လန့်နိုးလာပြီး အားဒမ်နှင့် ဒညင်းမယ်လေးတို့၏ ဖရန့်ကစ်ကို တွေ့သွားကာ အောင်မလေး အရပ်ကတို့ရေဟု အာခေါင်သံကြီးဖြင့် ကြုံးအှောလိုက်လေတော့သည်။
Posted by NLS at 5/31/2009 05:53:00 PM No comments:
Posted by NLS at 5/25/2009 11:01:00 AM No comments:
စရေးတုန်းကတော့ အိုင်ဒီယာမဂဿဂဇင်း နှစ်ပတ်လည်အတွက် ရည်စူးပြီး ရေးတာပါပဲ။ နှစ်ပိုဒ်လည်းပြီးရော လက်က လုံးဝမရတော့ဘူး။ အပြောင်အပျက်ဘက်ကို ရောက်သွားတော့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ စင်မတင်နိုင်တဲ့ စာတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားပါရော။ ဘာသာရေး အမြင်တွေနဲ့ မဖတ်ဖို့ကိုတော့ ကြိုတောင်းပန်ထားပါရစေ ခင်ဗျ။
သမီးကို အကြည်တှော ပေါင်ငါးဆယ်
မင်းသိခဿင ပေါင်နှစ်ဆယ် ယူမယ်ဗျို့
ယနေ့မှစ၍ နောင်နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာလွန်သော ကာလတစ်ခုတွင် စကြဝဠာအတွင်းမှ ဂြိုဟ်ပဲ့တစ်ခုသည် ကမဿဘာ့ ဆွဲငယ်အား နယ်ပယ်အတွင်း အရှိန်ပြင်းပြင်း ဝင်ရောက်လာကာ ကမဿဘာကြီးကို ဝင်ဆောင့်လေသည်။ ထိုဖြစ်ရပ်ကြောင့် ကမဿဘာ့ရေထု အပှေါသို့ သုံးပေခန့် မြင့်တက်လာခဲ့ပြီး ကမဿဘာ့မြို့ကြီး တှောတှောများများ ပျက်စီးသွားခဲ့ရ၏။ ကမဿဘာ့မြေလွှာ အတှောများများလည်း တွန့်ခေါက်သွားခဲ့ရပြီး နေရာအနှံ့ ပြတ်ရွေ့ကြောင်းကြီးများ ဧရာမချောက်ကြီးများ တောင်တန်းကြီးများ ဖြစ်ပှေါလာခဲ့သည်။ ကမဿဘာလောကကြီး တစ်ခုလုံး မှောင်အတိ ကျသွားခဲ့ရပြီး ယင်းသို့ ပြင်းထန်သည့် အရှိန်ကြောင့် လူပေါင်းများစွာ သေဆုံးခဲ့ရသည်။ မသေဘဲ ကျန်ခဲ့သူ တှောတှောများများမှာလည်း ကမဿဘာမြေတွင် ဆွဲငင်အား မတည်ငြိမ်ဘဲ ဟိုမှသည် သည်မှဟိုသို့ အတိအကျမရှိ ယိမ်းထိုး လည်ပတ်မှုကြောင့် ဦးနှောက်ယိုယွင်းကာ အသိမှတ်ဉာဏ်အားလုံး ပျက်စီးကုန်လေသည်။ ကမဿဘာကြီး၏ သံလိုက်စက်ကွင်းများလည်း ပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပြီး မြောက်နှင့်တောင် ဝင်ရိုးစွန်း နှစ်ဘက်မှာ နေရာပြောင်းက ယခု ကျွန်ုပ်တို့ နေထိုင်ရာ ရန်ကုန်မြို့ကြီးသည် မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း တည့်တည့် ဖြစ်လာခဲ့ရလေသည်။ မြောက်ဝင်ရိုးစွန်း ဖြစ်သွားသှောလည်း ရှေးယခင် ကကဲ့သို့ နှင်းများ ကျခြင်း ရေခဲခြင်းများ မရှိတော့ဘဲ ပကတိရာသီဥတုသာ ဖြစ်တော့သည်။ အလင်းရောင်ကို အရူးအမူး လိုချင်ကြကုန်သော ရှေးခေတ်က ရန်ကုန်သားများမှာ ယခုကဲ့သို့ ၂၄နာရီ နေရောင်ခြည် လုံလောက်စွာ ရနေသော မြောက်ဝင်ရိုးစွန်းက ရန်ကုန်မြို့ကြီး၏ ယနေ့ဖြစ်အင်ကို မြင်များမြင်တွေ့ခဲ့လျှင် လွန်စွာ ရင်ထုမနာ ဖြစ်ကြမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ် မလွဲပါချေ။ ယခင် တောင်တန်း ဒေသများမှာ မြေပြန့်လွင်ပြင် ဖြစ်သွားခဲ့ပြီး၊ ယခင် မြေပြန့်ဒေသများမှာ တောင်ကုန်းတောင်တန်းများ ဖြစ်ကုန်တော့သည်။
လောကနိယာမ ပျက်ခြင်း ပြုခြင်းများ ပြီးပြီးနောက်၊ ဘုရားသခင်၏ ကျွန်တှောတို့ သိသမျှ ဒုတိယ သတဿတပါတ် ကုန်ဆုံးပြန်သောအခါ ဤကမဿဘာကြီးတွင် လူများ ထပ်မံပှေါပေါက်လာပြန်သည်။ လူများဟု ဆိုခြင်းမှာ နေရာဒေသကိုလိုက်ပြီး ချားလ်ဒါးဝင် တီထွင်ခဲ့သည့်အတိုင်း မဆီမဆိုင် မျောက်ဖြစ်နေကြသည့် လူများ၊ မဟာဗြဟဿမာကြီး၏ မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းမှ ဖြစ်လာကြမှန်း မသိ ဖြစ်လာကြသော လူများ၊ ကောင်းကင်သနင်း သိကြားမင်းကြီး ကာမရာဂ မအောင့်အီးနိုင်ရာမှ သမုဒဿဒရာထဲ အဖိုမျိုးစေ့ကျပြီး မိခင် မြေကြီး၏ဓာတ်ဖြင့် လူဖြစ်လာကြသူများ၊ ပထမအကြိမ်တုန်းက လူ၏ လက်ျာနံရိုးကို အသက်ဓာတ် မှုတ်သွင်းပြီး လူမိန်းမ ဖြစ်စေရာမှ အကြင်လူနှင့် လူမိန်းမ ပူးပေါင်းကာ သူ့အား တှောလှန်ကြသည့်အကြောင်းကို သိပြီး ဖြစ်တှောမူသောကြောင့် နှစ်ဘက် ညှပ်တိုက်ခံရခြင်းကို ကာကွယ်ရန် ဂရိနတ်သမိုင်းထဲကအတိုင်း လက်လေးဘက် ခြေထောက်လေးချောင်း ခေါင်းနှစ်လုံးနှင့် ကိုယ်တစ်ခု ပုံစံ ဖန်ဆင်းခံရသော ဟိုက်ဘရစ် အမျိုးအစား စကန်းဂျန်နရေးရှင်း လူများ၊ ရုပ်နာမ်နှစ်ပါးအစွဲထားပြီး ကြက်ဥအစရှာမရသလို ဖြစ်လာကြသည့် လူများ စသည်ဖြင့် အမျိုးအစားများလည်း ကွဲလေ၏။
ယခုအကြိမ် ဧဒင်ဥယျာဉ် တည်နေရာသည် ဟိုးလွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်းများစွာက မြန်မာပြည်ကြီးရှိ ကန်တှောကြီးပန်းခြံ ရှိခဲ့ရာ နေရာ ဖြစ်လာလေသည်။ ယခင်ဧဝ အမည်ကိုကား မြန်မာမှုပြုကာ အေးမဟု ခှေါတွင်စေ၏။ အာဒမ်ကိုကား ဤပြည်ကြီးဝယ် ရှေးယခင်က စိနတိုင်းသား အမြောက်အများ နေခဲ့ဖူးသည်ကို အမှတ်ရစိမ့်သောငှာ အားနိမ့်၊ အားဆိမ့်၊ အတူး စသည့်နာမည်များအတိုင်း အားဒမ်ဟု ခှေါတွင်စေ၏။ ယခင်က ဤနေရာတွင် ကရဝိက်ရုပ်ကြီး ရှိခဲ့ဖူးသောကြောင့် အမှတ်တရ အနေဖြင့် ကရဝိက်ဥယျာဉ်ဟု အမည်ပညတ်ထားလေ၏။ တနေ့သောအခါ ဒါဝင်၏ လူများသည် ဟိုမှသည် သည်မှဟို လှည့်လည်သွားလာရင်း ထိုဥယျာဉ်ထဲသို့ ရောက်လာလေသည်။ ထိုသူတို့၏ ပုံစံမှာ မျောက်ပုံစံ ဖြစ်နေသောကြောင့် အေးမသည် လန့်၏ အှောသည်။ ထိုအခါ ထိုသူများမှာလည်း လက်လေးဘက် ခြေလေးဘက် ဖြစ်နေသော ထိုစုံတွဲအား ရုတ်တရက်မြင်ပြီး ဘီလူးသရဲ တွေ့သည့်အလား ကရောသောပါး ထွက်ပြေးကြသည့်ကာလ ပြုတ်စားရန် သယ်လာသော ဒညင်းသီးတစ်စေ့သည် ထွက်ကျကျန်ခဲ့လေသည်။ ကာလအတန်ကြာသောအခါ ထိုဒညင်းသီးစေ့မှ ဒညင်းပင်ပေါက်လာပြီး ဒညင်းသီးများ သီးလေတော့သည်။
ထိုဒညင်းသီးများထဲမှ ဒညင်းသီးတစ်လုံးသည် ထူးထူးခြားခြား ကြီးမားလှချေရာ မသကဿငာသောကြောင့် တက်ရောက် ကြည့်ရှုသောအခါကာလ ဒညင်းသီးအတွင်းမှ မိန်းမပျိုလေးတစ်ယောက် ထွက်လာလေသည်။ သံသေဒဇ ဒညင်းပင်ကို မှီကာ မွေးလာသောကြောင့် အဆင်းမှာ ညိုညက်ညက် ရှိလေ၏။ မွေးမွေးချင်းပင် ထိုမိန်းမပျိုလေးမှာ ၁၆နှစ်သမီးအရွယ် ရှိနေပြီး ရှိုက်ဖိုကြီးငယ် အသွယ်သွယ်နှင့်လည်း ပြည့်စုံလေသည်။ သို့ရာတွင် ဓမဿမတာအရ နို့ဆာ၍ငိုလေရာ အေးမက ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ကြောင်ကြည့်နေဆဲခဏတွင် အာဒမ်သည် စေတသိက် လှုံ့ဆှောမှုအရ မိမိလက်ညှိုးကို အဆိုပါ မိန်းကလေး ပါးစပ်ထဲ ထည့်ပေးလိုက်သောအခါ အငိုတိတ်သွားသော ဟူ၏။ ထိုအခိုက် လေပြင်းမိုးပြင်းများ ကျလာပြီး မုတ်ဆိတ်ကျင်စွယ် ဗရပြစ်နှင့် ဆာဒူးကြီးတစ်ပါး ရောက်လာကာ အဆိုပါ ကလေးမမှာ ဟိုးယခင်ဘဝပေါင်းများစွာ ပုဂံခေတ်ကြီး ကောင်းစားစဉ် ကာလက ဝါးအတွင်းမှ မွေးဖွားသူ ဝေဠုဝတီ ဝင်စားသူပင်ဖြစ်ကြောင်း၊ လက်ညှိုး ပါးစပ်ထဲ ထည့်ရုံဖြင့် ကလေး နို့ဆာ မပြေကြောင်း ပြောဆိုကာ မေဓာဝီသီချင်းကို ဝင်းဦးကဲ့သို့ သီဆိုရင်း အဓိဋဿဌာန်ပြု၏။ ထိုသောအခါ သူလက်ညှိုးမှ နို့မိုးများ သွန်းဖြိုးရွာသည် ဟူ၏။ ထို့နောက် သူသည် အားဒမ်၏ လက်ကို ကောင်မလေး ပါးစပ်မှ ဆွဲနှုတ်ခါ သူ့လက်ကို ထည့်လိုက်ပြီး မွှေ၍ပင် နေလိုက်သေးသည်။ ဒညင်းမယ်လေးမှာလည်း နွားသိုးကြိုးပြတ် တပြွတ်ပြွတ်နှင့် အငမ်းမရ စို့ရရှာလေ၏။
အားဒမ်နှင့် အေးမသည်ဤလောကကြီးအတွင်း သူတို့ နှစ်ဦးတည်းသာ ရှိသည်ဟု ထင်ထားရာမှ ဒါဝင်၏ လူမျောက်များကိုလည်းကောင်း၊ ဗြဟဿမာကြီး လွှတ်လိုက်သည့် ဆာဒူးကြီးကိုလည်းကောင်း၊ အရှင်လတ်လတ် ဒညင်းသီးထဲမှ ထွက်လာသော ဒညင်းမယ်လေးကိုလည်းကောင်း တစ်ဆက်ထဲ တွေ့ရသောအခါ မျက်စိများပင် ချာလပတ် လည်နေလေတော့သည်။ သူတို့အတွက် ပို၍ ထူးဆန်းနေသည်မှာ သူတို့မှလွဲ၍ ထိုသူအားလုံး ခြေနှစ်ချောင်း လက်နှစ်ချောင်း သီးခြားစီ လွတ်လွတ်လပ်လပ် သွားလာနေကြပုံကို မြင်တွေ့ရသောကြောင့်ပင် ဖြစ်သည်။ အားဒမ်သည် ဒညင်းမယ်လေးကို မြင်ပြီးနောက် ရင်တဒိတ်ဒိတ် ခုန်နေ၏။ အေးမမှာကား ဘာကို ဒေါသဖြစ်လို့ ဖြစ်မှန်းမသိ၊ ဘာကို ခံပြင်းလို့ ခံပြင်းနေမိမှန်းမသိ။ သူသိသည်မှာ သူသည် ဒညင်းမယ်ကို လုံးဝလုံးဝ ကြည့်မရခြင်းပင် ဖြစ်လေသည်။ ထိုထက် ပိုဆိုးသည်မှာ အားဒမ်က ဒညင်းမယ်အား ခြေအဆုံး ခေါင်းအဆုံး တပြုံးပြုံးနှင့် အမုန်းကြည့်နေသောကြောင့်ပင် ဖြစ်လေတော့သည်။
Posted by NLS at 5/23/2009 07:59:00 PM No comments:
Data Record တစ်ခုဟာ အမြဲတမ်း Leader နဲ့ စတယ်။ သူက စာလုံးပေါင်း ၂၄လုံး နေရာယူတယ်။ Leader ရဲ့နောက်က Directory ဆိုတာ တဆက်တည်း ပါလာမယ်။ Directory က နောက်ကပါလာမယ့် Variable Fields တွေရဲ့ နေရာကို ညွှန်ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းကို လုပ်ဆောင်တယ်။ Directory ဟာ သုညကနေ ၁၁အထိ စာလုံး ၁၂လုံး နေရာယူထားတယ်။ ပထမ သုံးလုံးက သက်ဆိုင်ရာ Tag ကို ကိုယ်စားပြုတယ်။ ဒုတိယ ၄လုံးက အဲဒီ Field မှာ ထည့်သွင်းမယ့် ဒေတာရဲ့ ပမာဏကို ဖှောပြတယ်။ တတိယ ၅လုံးက အဲဒီ ဒေတာရဲ့ နေရာကို ဖှောပြတယ်။ Directory ရဲ့နောက်မှာ Variable Fields တွေ ရှိတယ်။ သူ့မှာ Variable Control Fields နဲ့ Variable Data Fields ဆိုပြီး နှစ်ပိုင်း ရှိတယ်။ VCF က 001-008 အထိ ဂဏန်းသုံးလုံးနဲ့ အမျိုးအစား ခွဲခြားထားတယ်။ VCF မှာ Indicator တွေ Subfield Codes တွေ မရှိဘူး။ VDF မှာတော့ 010-08X အထိ Number and Code Fields နဲ့ Classification and Call No. Fields ဆိုပြီးတော့ သက်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်တွေကို သိုမှီးတယ်။ VDF မှာတော့ Indicators တွေ Subfield Codes တွေ ရှိတယ်။ အဲဒီရဲ့ နောက်မှာတော့ အသေးစိတ် အချက်အလက်တွေ ပါဝင်တဲ့ Heading Field ပါလာပါတယ်။ သူက 100 ကနေ 887 အထိ ပုံစံအမျိုးမျိုး ခွဲခြားထားတယ်။ Field တစ်ခုနဲ့ အခြားတစ်ခုကို (|) ဆိုတဲ့ Field Terminator သကေဿငတကို အသုံးပြုပြီး ခွဲခြားထားတယ်။ အားလုံးပြီးသွားရင်တော့ Record Terminator သကေဿငတ တစ်ခုခုကို နောက်ဆုံးမှာ ထည့်သွင်းပေးရမယ်။
ဒီသုံးခုက MARC ဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ အဓိက ကျောရိုးပါပဲ။ Variable Fields မှာ အပိုင်းနှစ်ခု ရှိတယ်။
အဲဒီနှစ်ခုထဲမှာမှ Variable Data Fields ကို မျိုးတူစုတွေ ခွဲလိုက်ရင်
Number and Code Fields (01X-04X)
Classification and Call No. Fields (05X-08X)
Heading Fields (1XX-8XX)
Title and Title related Fields (20X-24X)
Edition, Imprint, Etc. Fields (25X-28X)
Physical Description, Etc. Fields (3XX)
Series Added Entry Fields (80X-83X)
Holdings, Location, Alternate Graphics, Etc. Fields (841-88X)
အဲဒီလို အမျိုးအစားတွေ ခွဲထားတယ်။ သက်ဆိုင်ရာ နေရာမှာ သက်ဆိုင်ရာ သတ်မှတ် ကုဒ်တွေကို ထည့်ပေးရတယ်။
Leader ဆိုတာက MARC ဖှောမတ်မှာ ထိပ်ဆုံးက နေရာယူထားတဲ့ ကဏဿဍတစ်ခုပါ။ သူ့မှာ Indicator တွေ Subfield တွေ မပါဝင်ပါဘူး။ Leader Field ဟာ အချက်အလက် ထည့်သွင်းရာမှာ 00 ကနေ 23 အထိ ၂၄နေရာ ယူထားတယ်။ ဥပမာ-
၁။ သုညကနေ နံပတ်၎အထိ နေရာဟာ Record Length ကို ညွှန်းတာပါ။
၂။ နံပတ်ငါး နေရာကတော့ Record Status ကို ညွှန်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Record Status အနေနဲ့ အသုံးပြုတဲ့
စတာတွေကို သိထားရပါမယ်။ အထက်က ဥပမာမှာ အဲဒီနေရာမှာ (n) ကိုတွေ့ရတာကြောင့် ဒါဟာ New Status အနေနဲ့ ပြကြောင်း သိနိုင်ပါတယ်။
၃။ နံပတ်ခြောက် နေရာက Type of Record ကို ညွှန်းပါတယ်။ TOR အနေနဲ့
စတဲ့ Variable တွေကို အသုံးပြုပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ (a) ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ဒါဟာ Language Material ဆိုတာ သိနိုင်ပါတယ်။
၄။ နံပတ်ခုနစ် နေရာက Bibliographic Level ကိုဖှောပြပါတယ်။
ဒီနေရာမှာ (M) ကိုတွေ့ရတဲ့အတွက် ဒါဟာ (Monograph/Item) အနေနဲ့ သိနိုင်ပါတယ်။
၅။ နံပတ်ရှစ် နေရာက Type of Control ဆိုတာကို ပြပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ (#) ဆိုတာက No Specific Type ကို ရည်ညွှန်းပြီး၊ (a) ဆိုတာက Archival ကို ရည်ညွှန်းပါတယ်။
၆။ နံပတ်ကိုး Character Encoding Scheme မှာတော့ (#) ဆိုတာ MARC-8 ဖှောမတ်ကို ကိုယ်စားပြုပြီး၊ (a) ကတော့ UCS/Unicode ဖှောမတ်ကို ညွှန်ပြပါတယ်။
၇။ နံပတ်တစ်ဆယ် နေရာက Indicator Count ကိုပြောတာပါ။ Indicator ဟာ နှစ်လုံးပဲ ရှိတဲ့အတွက် အမြဲတမ်း (2) လို့ ထည့်ပေးရပါတယ်။
၈။ နံပတ်ဆယ့်တစ် နေရာက Subfield Codes Count ဆိုတာကို ပြောတာပါ။ အမြဲတမ်း (2) လို့ ထည့်ပေးရပါတယ်။
၉။ နံပတ်ဆယ့်နှစ်ကနေ ဆယ့်ခြောက် အထိ နေရာငါးခုက Base address of data တွေကို ပြပါတယ်။
၁၀။ နံပတ်ဆယ့်ခုနစ် Encoding Level မှာ
ဆိုပြီး သတ်မှတ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာမှာတော့ အဲဒီနေရာမှာ (#) လို့ ပြထားတဲ့အတွက် Full Level Encoding လို့ သိနိုင်ပါတယ်။
၁၁။ နံပတ်ဆယ့်ရှစ် နေရာကတော့ Descriptive cataloging form ကို ပြပါတယ်။ သူက လေးမျိုး ရှိပါတယ်။
ဥပမာမှာ (a) လို့ ထည့်သွင်းထားတာကြောင့် AACR2 ကတ်တလောက် စနစ်ကို အသုံးပြုထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၁၂။ နံပတ်ဆယ့်ကိုး နေရာဟာ Multipart resource record level ကို ညွှန်းပါတယ်။
၁၃။ နံပတ်နှစ်ဆယ် နေရာက Length of the length-of-field portion ဆိုတဲ့ Directory ကဏဿဍက Length of Field မှာရှိတဲ့ စာလုံး အရေအတွက်ကို ထည့်ပေးရတာပါ။ အဲဒီနေရာမှာ အမြဲတမ်း (4) ဂဏန်းကိုပဲ ထည့်ပေးရပါတယ်။
၁၄။ နံပတ်နှစ်ဆယ့်တစ် နေရာက Length of the starting-character-position portion ကို ညွှန်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာလည်း အမြဲတမ်း (5) ဂဏန်းကိုပဲ ထည့်ပေးရပါတယ်။
၁၅။ နံပတ်နှစ်ဆယ့်နှစ် နေရာက Length of the implementation-defined portion ကို ညွှန်းပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ အမြဲတမ်း (0) ဂဏန်းကိုပဲ ထည့်ပေးရပါမယ်။
၁၆။ နံပတ်နှစ်ဆယ့်သုံး နေရာက ဘာသတ်မှတ်ချက်မှ မရှိသေးတဲ့ Undefined နေရာပါ။ အဲဒီမှာလည်း အမြဲတမ်း (0) ကိုပဲ ထည့်ပေးရပါတယ်။
Remark: ပုံတွေနဲ့ စာတွေနဲ့ ရောတင်ရတာ ဒီအပှေါမှာ တှောတှောခက်တယ်။ ဒါကြောင့် စိတ်ဝင်စားတဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ် သိချင်တဲ့သူ၊ ဒါမှမဟုတ် သင်ပေးချင်တဲ့သူ ရှိရင် မေးလ်သာ ပို့ပါတော့ခင်ဗျာ။
Posted by NLS at 5/23/2009 01:51:00 PM No comments:
ဒီဝတဿထုလေးကို ကြိုက်လွန်းလို့ ၂၀၀၆ ဇူလိုင်လ ၂၄ရက်နေ့မှာ ကျွန်တှောကိုယ်တိုင် မူရင်းစာအုပ်ကနေ ပြန်ရိုက်ယူခဲ့တယ်။ ဂျူးလို့ ပြောလိုက်တာနဲ့ ကျွန်တှော ဒီဝတဿထုလေးရယ်၊ စာပို့သမား ဝတဿထုလေးရယ်ကို ပြေးမြင်တတ်တယ်။ ဒီဟာလေးကို ဝင်းဖောင့်နဲ့ ရိုက်ထားတာကြောင့် ဇှောဂျီ ကွန်ဗတ် လုပ်ပြီး ပြန်တင်ထားလိုက်တယ်။ ဒီဝတဿထုလေးကို ကျွန်တှော ဘာကြောင့် ကျွန်တှော ဒီလောက် ကြိုက်သလဲဆိုတာ ဖတ်လိုက်မိရင် သိသွားပါလိမ့်မယ်။
သူမရှိသောအခါ သူ့သစ်ပင်များသည် ကျွန်မအတွက် မျှောလင့်မှု ပေးစွမ်းနိုင်သော မြတ်နိုးဖွယ်ရာ သက်ရှိများ ဖြစ်လာပါတော့သည်။ သူရှိစဉ်က ထိုသစ်ပင်များကိုပင် ကျွန်မ ငြူစူ မုန်းတီးခဲ့ဖူးပါသည်။
ကျွန်မတို့ ခြံစည်းရိုး သံတိုင်များ နောက်ကွယ်တွင် သစ်ပင်များ တန်းစီ၍စိုက်ရန် သူကြိုးစား ကတည်းက ကျွန်မနှင့်သူ အချေအတင် စကားများ ခဲ့ရသည်။ ဤသည်မှာ သူ၏ သစ်ပင်စိုက် ဝါသနာ အစပင် ဖြစ်သည်။ ကျွန်မက ခြံစည်းရိုးမှ အပြင်သို့ တိုးလျှိုးပေါက် လှမ်းမြင်ချင်သည်။ ခြံထဲသို့ တစ်စုံတစ်ယောက် ကျှောလွှား ဝင်လာလျှင်တောင်မှ တိုက်ထဲကနေ လှမ်းမြင်ရချင်သည်။ သူ့သစ်ပင်တွေက ကန့်လန့် ပိတ်ဆီးထားမည်ကို ကျွန်မ မလိုလားပါ။ နောက်ပြီး သူစိုက်မည်ဟု ရည်ရွယ်ထားသော အပင်အမျိုးအစားကို သိရတော့ ကျွန်မ၏ မကျေနပ်မှုက ထိတ်လန့်မှုအဖြစ် ပြောင်းလဲသွား၏။ ဆိုက်ပရက်စ်ဟုခှေါသော ထင်းရူးပင်ပေါက်တစ်မျိုး သူမှာထားသည်တဲ့။ ထိုအပင်များသည် ရာသီမရွေး စိမ်းမှောင်လန်းဆန်းပြီး ရှည်သွယ်သောကြောင့် ခြံစည်းရိုး အဖြစ် သုံးသော အပင်မျိုး ဖြစ်သည်တဲ့။
"နေစမ်းပါဦး၊ အဲဒီ ဆိုက်ပရက်စ် ပင်ဆိုတာက သူတို့ဆီမှာ လူသေရင် ဝမ်းနည်းတဲ့ အထိမ်းအမှတ် အဖြစ် စိုက်တာ မဟုတ်လား၊ ရှင်က ကျွန်မတို့အိမ်ကို အမဂဿငလာအိမ်ဖြစ်အောင် လုပ်မလို့လား"
ထိုအခါ သူက စုတ်တစ်ချက် သပ်ကာ "အဲဒါက ဖြူနရယ်လ် ဆိုက်ပရက်စ်ကွ၊ ကိုယ်စိုက်မှာက အရီဇိုးနား ဆိုက်ပရက်စ်" ဟု စိတ်မရှည်သလို ပြောပြီးနောက် ထိုအပင် အမျိုးအစားများကို အားရပါးရ ခွဲခြား ရှင်းပြနေလေသည်။ ရုကဿခဗေဒ အဓိက ဘာသာရပ်ဖြင့် ဘွဲ့ရထားသူ တစ်ယောက်ဟု ထင်ရသည်။ သို့သှော သူသည် ဘီအေဘွဲ့ရ ကျောင်းဆရာ တစ်ယောက်ဖြစ်ပြီး သူသင်ကြားရသည်မှာ သမိုင်းဘာသာ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မက သူ့အစီအစဉ်ကို အကြောင်းပြချက် နှစ်မျိုးဖြင့် ငြင်းပယ်ခဲ့သှောလည်း နောက်ဆုံးတော့ သူက မျှတအောင် လုပ်ပေးတော့မည့် ဒိုင်လူကြီး အပြုံးမျိုးဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပေး၏။ ကျွန်မ မစိုက်စေချင်သော အပင်မျိုးကို သူအလျော့ပေးလိုက်ပြီး သူဖြစ်စေချင်သော ခြံစည်းရိုးပင် တစ်မျိုးကို စိုက်ပျိုးခဲ့ခြင်းပင် ဖြစ်ပါသည်။
ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်မတို့ ခြံဝိုင်းထဲသို့ အပင် တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး ရောက်လာခဲ့သည်။ ပထမတော့ သူ့အပင်များနှင့် ကျွန်မအား မိတ်ဆက်ပေးသေး၏။ မြန်မာအမည်၊ နိုင်ငံခြားအမည်၊ ရုကဿခဗေဒအမည် တို့ဖြင့် ပြောပြသည်။ တစ်မျိုးပြီး တစ်မျိုး များပြားလာသောအခါ ကျွန်မ မမှတ်မိ နိုင်တော့ပါ။ သူတန်ဖိုးထားသော အပင်များသည် ကျွန်မ မျက်စိ ထဲမှာတော့ နည်းနည်းမျှ တန်ဖိုးမရှိ။ ငှက်မွှေး ပုံသဏဿဍာန် ဖြာထွက်နေသော ရွက်မြွာများ ပါဝင်သည့် ဍရင်ကောက် ပင်ဟု သူပြောသော အပင်တစ်ချို့ကို တိုက်နံရံ ထောင့်အထိကပ်၍ ပန်းအိုးဖြင့် စိုက်လာသောအခါ ကျွန်မ အနည်းငယ် စိတ်တိုစ ပြုလာပြီ။ သူပြောတော့ အစိမ်းနုဖျော့ဖျော့ တိုက်နံရံမှာ အစိမ်းရင့် ငှက်မွေး ရွက်ပေါင်းများ ဖြာထွက် စင်းကျနေသည်မှာ အလွန်လှပ ကြည့်ကောင်းသည် ဆိုပဲ။ ပထမတော့ သူပြောသလို လှပချင် လှပပါလိမ့်မည်။ နောက်ပိုင်း သူ့မှာ အပင်တွေ များပြားလာပြီး ခြံဝိုင်း တစ်ခုလုံး အမျိုးမျိုးသော အိုးစိုက် အပင်များ၊ မြေစိုက် အပင်များ၊ တွဲလွဲဆွဲ အပင်များဖြင့် ပြည့်ကျပ် သွားသောအခါ မလှပတော့ပါ။
သစ်ပင်တွေ ရောက်လာကတည်းက ကျွန်မနှင့် သူ့အကြား အေးအေးဆေးဆေး စကားပြောရချိန် မရှိ၊ ကျောင်းက ပြန်လာကတည်းက သစ်ပင်တွေအနီး ရောက်နေလိုက်သည်မှာ ညစာ စားဖို့ နှစ်ခါလောက် ခှေါမှ အိမ်ထဲ ဝင်လာသည်။ ညစာ စားပြီးတော့လည်း အမှောင်ထဲမှာ ခြံထဲတစ်ခါဆင်း၍ သစ်ပင်တွေကြား လမ်းလျှောက် ရသေး၏။ အပင်ကြို အပင်ကြား ပိုးမွှားတွေကိုက်မှာ စိုးရိမ်သော ကျွန်မက အိမ်ထဲဝင်ဖို့ သွားပြောလျှင် ကျွန်မကပဲ သူမရှိလျှင် မနေတတ်သူ ဖြစ်ရပြန်၏။ သစ်ပင်များ အပှေါပင် ကျွန်မက မနာလိုသူ ဖြစ်ရပြန်၏။
"ရှင်သေရင် သူများလို ဥစဿစာစောင့် ဖြစ်မှာ မဟုတ်ဘူး၊ သစ်ပင်စောင့် ပြိတဿတာဖြစ်မှာ" ဟု ကျွန်မက ဆူပူလျှင်လည်း သူက အပြုံးပင် မပျက်ပါ။
"ရုကဿခစိုး နတ်ပါကွာ"ဟု ကျွန်မ၏ ကောက်ချက်ကို ပြင်ပေးသေး၏။
သူ့သစ်ပင်များကို စိတ်လိုလက်ရ ရေလောင်းပေးမိ ပြန်တော့ ကျွန်မ၏ လုပ်ရပ်ကို သူမကြိုက်ပြန်ပါ။
"ဘယ်အပင်ဟာ ရေဘယ်လောက် လိုတယ်ဆိုတာ မင်းသိလို့လား၊ တစ်ချို့ အပင်တွေက ရေအိုင်ရင် အမြစ်ပုပ်တယ်၊ မင်းနားလည်လား"
သူ့သစ်ပင် တစ်ခုတစ်လေကို အစီအစဉ်တကျ မလှပဘူး ထင်ပြီး အဆင်ပြေအောင် နေရာ ရွှေ့ပေးမိပြန်တော့ သူကျွန်မကို တတွတ်တွတ် အပြစ်ဆို၍ မပြီးတော့ပါ။
"တချို့အပင်က တစ်ဝက်တစ်ပျက် အရိပ်ကို ကြိုက်တယ်၊ တချို့ အပင်က တောက်ပတဲ့ နေရောင်ကို ကြိုက်တယ်၊ အပင်တွေရဲ့ လိုအပ်မှုအလိုက် ကိုယ်က နေရာ ချထားပေးတယ်၊ မင်းက နဲနဲလေးမှ နားမလည်ဘဲ နေရာရွှေ့တယ်၊ ဥယျာဉ်ပညာဟာ မျက်စိပသာဒ တစ်ခုတည်း အပှေါမှာ ဆုံးဖြတ်လို့ မရဘူး"
စေတနာဖြင့် လုပ်ခဲ့သော အမှုကိစဿစလေးနှင့် မထိုက်တန်စွာပင် သူ့ရှင်းပြချက်တွေကို နားငြီး ရလေသည်။ သည်လောက် ကဲကဲဆတ် ဖြစ်လာတော့ ကျွန်မ ဒေါပွလာသည်။ သူ့အပင်တွေက ဘာမို့လဲ။ နောက်တော့ ကျွန်မ သူ့အပင်တွေကို လုံးဝ မထိတော့။ လုံးဝကို လှည့်မကြည့်တော့ပေ။
"ရှင်သေရင် အဲဒီသစ်ပင်တွေ ဓားနဲ့ နုပ်နုပ် စင်းပစ်မယ်"ဟု ကျွန်မ မကြာခဏ ကြုံးဝါးမိသည်။ သည်လို ဆိုပြန်တော့ သူခပ်ပြုံးပြုံးပဲ။
"ကိုယ်လက် လှုပ်ရှားမှု မလုပ်ဘဲ တစ်နေကုန် စက်မှာထိုင်ပြီး ဆွယ်တာထိုးနေတဲ့ မင်းကသာ အရင်သေချင် သေမယ်၊ ကိုယ်က ကျန်းမာရေး ကောင်းတယ်၊ ကိုယ့်သစ်ပင်တွေနဲ့ ကိုယ် အဆင်ပြေ နေတာပဲ"
သစ်ပင်တွေနှင့် ပတ်သတ်ပြီး သူ့ကို ကျွန်မ စိတ်ကုန်စ ပြုလာသောအခါ သူ့သစ်ခွပင်မှ ဦးဦးဖျားဖျား အပွင့်များကို ကျွန်မကို လာပေးရင်တောင်မှ သူကုသိုလ်ရဖို့ ဘုရားကပ်လှူ ပေးရုံသာ ဖြစ်ပြီး သူကျွန်မကို ချစ်ဟန် တူပါရဲ့ဟု မကြည်နူး မခံစား နိုင်တော့ပေ။ ခြံဝိုင်း ထဲတွင်သာမက တစ်ဆင့်တက်ပြီး ဝရန်တာထောင့်မှာ မြေအိုးဖြင့် တစ်ပင် စိုက်လာသောအခါ ကျွန်မ၏ သည်းခံ လျစ်လျူရှုစိတ် တစ်ထစ် လျော့သွား၏။
"ရှင့်ဟာရှင် မြေကြီး ပှေါမှာပဲ အပင်စိုက် ကျွန်မ ဝရန်တာမှာ လာမစိုက်နဲ့"ဟု ကျွန်မ ရန်တွေ့သောအခါ သူက ကျွန်မကို အပြုံးဖြင့် ဆွဲဆောင်လေသည်။
"ဒီလို အပင်မျိုးက ဝရန်တာမှာ စိုက်လို့ သိပ်အဆင်ပြေတာကွ၊ သူက သိပ်စိုထိုင်းတာကို မကြိုက်ဘူး၊ သူ့အပွင့်တွေက သွေးလိုပဲ ရဲရဲတောက်နေမှာ၊ စောင့်ကြည့်၊ ပင်စည်တံကနေပြီး အညှာတွေ ဖြာထွက်ပြီး အဆုပ်လိုက် လုံးဝိုင်းနေအောင် ပန်းပွင့်တာ၊ ဘယ်လောက် တိကျသလဲ ဆိုရင် အရွက် ခုနှစ်ရွက်ပဲ ထွက်တယ် မပိုဘူး၊ သူ့နာမည်ကလည်း သိပ်လှတယ်၊ ကက်သရင်းတဲ့"
ကျွန်မကတော့ အရွက်ထွက်လာတာကို ကြည့်ပြီး ဂမုန်းပင် လိုပဲလို့ အောက်မေ့သည်။ ထိုအပင်က ပန်းပွင့်လာအောင် နှစ်နှစ် စောင့်ရ၏။ ပွင့်လာတော့လည်း သူပြောသလောက် မလှပပါ။ ဘောလုံးပန်းဟု ကျွန်မတို့သိသော ပန်းပုံစံ မျိုးပါပဲ။ ဘာများ ထူးခြားလို့လဲ။ နောက်ထပ် တစ်ဆင့်တက်ပြီး ဧည့်ခန်းမှာ တောင်ထန်းပင်လိုလို ပန်းပင်ပုပုတစ်မျိုး ပန်းအိုးဖြင့် စိုက်လာတော့ ကျွန်မ၏ သည်းခံစိတ်တွေ ကုန်ပြီဟု အောက်မေ့လိုက်မိသည်။ ထိုပန်းအိုးကို သူ့ရှေ့မှာ ရိုက်ခွဲ မပစ်မိအောင် မနည်း ထိန်းထားရသည်။
"နေစမ်းပါဦး၊ မင်းရွက်ထားရတာလည်း မဟုတ်ဘဲနဲ့ အပြစ်မရှိတဲ့ သစ်ပင်တွေကို ဘာလို့ မုန်းနေတာလဲ"
တကယ်တော့ ကျွန်မ သစ်ပင်တွေကို အရင်က မမုန်းပါ။ သူဂရုစိုက်လွန်း၊ အကဲပါလွန်းသောကြောင့်သာ ငြူစူမိခြင်း ဖြစ်သည်။ သူပြောသည့် သစ်ပင်စိုက်ခြင်း အကျိုးများကို ကျွန်မက တနုံ့နုံ့ ဒေါသထွက်ရသည်။ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ကျွန်မတို့ တောင်ပှေါမြို့လေးမှာ သည်လောက် လေကောင်းလေသန့် ပေါများတာ၊ အောက်စီဂျင်ထုတ်ပေးပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ် ဓာတ်ငွေ့ စုပ်ယူသည်ဆိုသော သူ့သစ်ပင်တွေ၏ အကူအညီ ဘယ်မှာ လိုလို့လဲ။ မတောက်တခေါက် စာတွေဖတ်ပြီး ပေါက်တတ်ကရတွေ လျှောက်လုပ်နေသည်ဟုသာ ကျွန်မမြင်သည်။ ထိုအပြုအမူမျိုးကို လွန်လွန်းလှပြီ ထင်နေသော ကျွန်မသည် နောက်ဆုံးတော့ ဘယ်လိုမှ သည်းမခံနိုင်သော အဖြစ်အပျက်ကို ကြုံတွေ့ရတော့သည်။ ကျွန်မတို့ အိပ်ခန်းထဲတွင် ပြတင်းပေါက်နှင့် နီးသော အခန်းခေါင်းရင်းထောင့်၌ ပန်းအိုးကြီးဖြင့် သစ်ပင် တစ်ပင် စိုက်လာခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်မ၏ သည်းခံနိုင်စွမ်းကို ချိုးဖျက်လိုက်သော ထိုအပင်သည် အပင်ပေါက်ကလေး ဘဝထဲက ရုပ်ဆိုးလှသည်။ ကျွန်မ မြင်ဖူးသမျှ အပင်များထဲတွင် ရုပ်အဆိုးဆုံး ဖြစ်သည်။ ကျွန်မ ခါးခါးသီးသီး ကန့်ကွက်တော့ သူက "အချိန်စောင့်ကြည့်ပါဦး"ဟု တောင်းပန်ခဲ့လေသည်။ ဤအပင်၏ တန်ဖိုးကို တစ်နေ့တော့ ကျွန်မ သိလာမှာပါတဲ့။ ဘာသိရမှာလဲ၊ ဘာတန်ဖိုးတွေ ရှိလို့ သိရမှာလဲ။ အမွှေးအမျှင်တွေနဲ့ ဆူးချွန်တွေနဲ့ လိမ်ခြောက်ခြောက် တစောင်းပြသာဒ်ပင် တစ်ပင်မှာ ဘာတန်ဖိုး ရှိမှာမို့လဲ။ သူက နားမလည်သော ကလေးတစ်ယောက်အား စိတ်ရှည်စွာ ရှင်းပြတော့မည့် ကျောင်းဆရာ မျက်နှာထား ပီသစွာဖြင့် ပြုံးလေသည်။ "သစ်ပင်တိုင်းမှာ တန်ဖိုး တစ်မျိုးစီ ရှိကြတာပဲ"တဲ့။
နှစ်နှစ်လောက် ကြာသောအခါ ထိုအပင်သည် အလွန်ကြီးမားပြီး ပို၍ရုပ်ဆိုးလာတော့သည်။ အခန်းနံရံဆီသို့ တွယ်တက်လိုဟန်ရှိသော ရှည်မျောမျော ပင်စည်ချောင်းများသည် ကိုးရိုးကားယား နိုင်လှ၏။ ပိန်ခြောက်ခြောက် လက်တံတွေနှင့် တူသော အစိမ်းပုပ်ရောင် ဇောင်းနှုတ်ခမ်းတွေမှာ ဆူးချွန်တွေ အမွှေးရှည်တွေနှင့် ဖြစ်၏။ လိမ်ကောက် ရှည်လျားပုံက သူ့အနီးသို့ ရောက်လာသော တစ်စုံတစ်ခုကို နွယ်ရစ် စုပ်ယူတော့မလို ထင်ရသည်။ ကျွန်မဖြင့် ထိုအပင်ကို လုံးဝ ကြည့်မရပါ။ ဘယ်တော့များ သူအပြင် ပြန်ထုတ်လေမလဲဟု စောင့်နေရင်းက ရက်တွေလတွေ ကြာလာခဲ့သည်။ ဘာစိတ်ကူးဖြင့် ဒီလောက် ကိုးရိုးကားယား နိုင်လှသော အပင်ကြီးကို ကျွန်မတို့ အခန်းထဲ သယ်လာခဲ့ရပါလိမ့်။
ညခပ်မှောင်မှောင်မှာ အခန်းထဲသို့ ဝင်မိလျှင် ထိုအပင်ကို မကြည့်မိအောင် သတိထားရသည်။ အရုပ်ဆိုးလှသော ထိုတစောင်းပင်သည် ထိတ်လန့် ချောက်ခြားစေသော အစွမ်းသတဿတိလည်း ရှိဟန်တူ၏။ သူ ထိုအပင်နား သွားပြီး စစ်ဆေး ကြည့်ရှု နေချိန်များတွင် ကျွန်မ ခပ်လှမ်းလှမ်းမှ ရင်ထဲလေးလံပြီး စိုးရိမ် ပူပန်သလို ခံစားရသည်။ တခါတရံ ညသန်းခေါင်တွင် သူအိပ်ယာမှ ထသွားတတ်သည်။ ကျွန်မ တရေးနိုးချိန် သူ့နေရာကို စမ်းသပ်ကြည့်၍ သူမရှိလျှင် ကျွန်မစိုးရိမ် ပူပန်ရမြဲ။ ခေါင်းရင်းဘက် နံရံကို ကြည့်လိုက်တိုင်းလည်း ထိုအပင်ဘေးတွင် သူခပ်ကိုင်းကိုင်း ငုံ့ရပ်နေသည်ကို မြင်ရမြဲ၊ ထိုသို့ မြင်ရတိုင်းလည်း ထိတ်လန့် ချောက်ခြားမှုနှင့်အတူ စိုးရိမ် ပူပန်မှုက တိုးတိုး လာခဲ့သည်။ "ဘာလုပ်နေတာလဲ"ဟု မေးကြည့်တော့ သူက ခပ်ရိုးရိုးပင်၊ "ပန်းပင်က အဖူးများ ထွက်ပြီလားလို့ ကြည့်တာ" တဲ့။
"ပန်းပင် ... ဟုတ်လား၊ ဘယ်မှာလဲ... ပန်းပင်" ဟု ကျွန်မ မသိသား ဆိုးရွားစွာ ခပ်ရိရိ မေးလျှင်တော့ သူက လိမ်ခြောက်ခြောက် အပင်ရှည်ကြီးကို မေးငေါ့ပြတတ်သည်။ အမွှေးအမျှင်များ ဆူးချွန်များ ပြည့်နေသော အခွံထူထူ၊ ဇောင်းရှရှ အချောင်းများဖြင့် ထိုအပင်ကို ပန်းပင်ဟု ကျွန်မ ဘယ်လိုမှ တွေးယူ၍ မရပါ။
"ကျွန်မတို့ မိဘတွေ နေဖူးတဲ့ အညာမှာတော့ တစောင်းဖူးကို ဟင်းချက် စားရတာပဲ၊ မှိုဟင်းလိုပဲ သိပ်စားကောင်းတယ်" ဟု ကျွန်မက အပြစ်ကင်းစင်သည့် မျက်နှာပေးမျိုးဖြင့် မသိမသာ တွယ်ထည့်လိုက်တော့ သူမချိသလို ပြုံးလေသည်။ ထို့နောက် "ပန်းပွင့်ဖို့ ကောင်းပြီ" ဟု သူ့ဟာသူ တစ်ယောက်တည်း ပြောသလို တိုးတိုး ရေရွတ်တတ်၏။ ထိုအပင်ကတော့ ဘာမှ မထူးခြားပါ။ ဘာပန်းမှလည်း မပွင့်။ ဘာတန်ဖိုးမှလည်း မပြ။ အခန်းထောင့်မှာ ထီးထီးကြီး တွန့်လိမ်နေတော့သည်။ ဘယ်လိုမှ ကျက်သရေ မရှိသော သစ်ပင်ကြီးဟု ကျွန်မ တွေးမိသည်။
"သစ်ပင်တွေကို မင်းမနာလို ဖြစ်နေတာလား" ဟု သူအတည်ပေါက် မေးဖူး၏။ ကျွန်မက နှုတ်ခမ်းမဲ့ပြီး အထက်စီးက ငြင်းခဲ့ဖူးပါသည်။ "သစ်ပင်တွေကို မင်းမချစ်ဘူးလား" ထိုစကားလုံးကိုတော့ ခါးသီးသော မျက်လုံးများဖြင့်သာ ကျွန်မ ဖြေခဲ့သည်။ ကျွန်မ အတွက်တော့ သိုးမွေးချည်တွေကို ချစ်မှ ပိုက်ဆံရတာ ဟု ပြောလိုက်ရ အကောင်းသားနှော။ သူကတော့ ကျွန်မမျက်လုံးထဲ စူးစိုက်ကြည့်ပြီး ပြုံး၏။ ထို့နောက် ရှည်လျားသော စကားများကို စိတ်လိုလက်ရ ပြောခဲ့လေသည်။
"သစ်ပင်တစ်ပင်ကို ချစ်တတ်ရင် လူတစ်ယောက်ကို ချစ်တတ်ဖို့ မခဲယဉ်းပါဘူး၊ အခုအရွယ်ကြီး ကျမှ အချစ်ဆိုတာ ဘာလဲလို့ မင်းကို ရှင်းပြရင် မင်းက ငါစိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီ ထင်ဦးမယ်။ တကယ်တော့ အချစ်ဆိုတာ ခံစားမှု စိတ်သက်သက် မဟုတ်ဘူး၊ အကဲခတ်တတ်မှု ပါတယ်၊ နားလည်မှု ပါတယ်၊ ပြုစုပျိုးထောင်မှု ပါတယ်။ ကိုယ်ဒီသစ်ပင်တွေကို အမျိုးအစား အများကြီး စိုက်လာခဲ့တာနဲ့အမျှ တစ်ခုချင်းစီရဲ့ ကွဲပြားခြားနားတဲ့ လိုအပ်မှု၊ ဖြစ်ပှေါမှု အခြေအနေ အားလုံးကို ကိုယ်သိတယ်။ သူတို့အတွက် ကိုယ်ဘာလုပ် ပေးရမယ်ဆိုတာ ကိုယ်သိလာတယ်။ ကိုယ့်စိတ်ရဲ့ လိုအင်ဆနဿဒဆိုတာ ကိုယ်မေ့ထားနိုင်ပြီး သစ်ပင်တွေရဲ့ လိုအပ်ချက်ကို အမြဲစောင့်ကြည့် ဖြည့်ဆည်း ပေးတတ်တဲ့လူ ဖြစ်လာတယ်။ ဘယ်သစ်ပင်က ဘယ်ရာသီမှာ ဘယ်လို အနေအထား ပြောင်းတတ်တယ်၊ ဘယ်သစ်ပင်က လေဒဏ်ကို ကြောက်တယ်၊ ဘယ်သစ်ပင် အမြစ်က မိုးပေါက်ဒဏ်ကို ကြောက်တယ့် ဒါတွေကို ကိုယ်နားလည်လာတယ်။ သူတို့လိုအပ်မယ့် နှစ်သက်မယ့် အနေအထားကို ကိုယ်အကဲခတ်ပြီး ပြုပြင် လိုက်လျောပေးတယ်။ ဒီမြို့ပှေါက ပန်းခြံတွေထဲမှာ ကိုယ့်ဆီက အပင်တွေ ဘာကြောင့် ထူးထူးခြားခြား သန်စွမ်း လှပနေရသလဲ ဆိုတဲ့ အဖြေက အဲဒါပဲ။"
"သစ်ပင်တွေရဲ့ အရိပ်အကဲကို သိတဲ့ ကိုယ်ဟာ မင်းအရိပ်အကဲကို ဘာကြောင့် မသိရမှာလဲ၊ မင်းဘာလိုချင်တယ်၊ ဘာဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုတာ ကိုယ်အားလုံး သိတယ်၊ အချစ်ဆိုတာ မင်းထင်သလို ခံစားမှု သက်သက် မဟုတ်ဘူး၊ အတတ်ပညာ တစ်ခုပဲ၊ သစ်ပင်စိုက်သလို ပြုစုပျိုးထောင်သလို ဘေးကနေ အရိပ်အကဲ ကြည့်ပြီး ပြုပြင် လိုက်လျောပေးရတဲ့ အတတ်ပညာ တစ်ခုပဲ၊ မင်းကတော့ ထင်မှာပေါ့၊ မင်းဘဝမှာ ကိုယ်မရှိရင် မဖြစ်ဘူးဆိုပြီး ခံစားနေရတယ်၊ အဲဒီ ခံစားချက်ဟာ မင်းရဲ့ အချစ်အတိုင်းအဆလို့ မင်းထင်တယ်၊ တကယ်တော့ အဲဒီလို မင်းဘဝမှာ ကိုယ်မရှိရင် မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ မင်းအသက်ရှင် နေထိုင်ဖို့ ကိုယ်မင်းအတွက် ဘာတွေ လိုက်လျောခဲ့တယ် ဆိုတာ မင်းမတွေးမိဘူး မဟုတ်လား"
ကျွန်မ မျက်နှာမှ မဲ့ပြုံးကို သူမြင်သွားသောအခါ သူပင့်သက်တစ်ချက် ရှိုက်၍ စကား ရပ်ပစ်လိုက်၏။ ထို့နောက် နေရာမှ ထွက်သွားဟန် ပြင်သည်။ ကျွန်မ ဗြုန်းကနဲ သူ့လက်ကို ဖမ်းဆွဲထားလိုက် မိလေသည်။
"အို့ ပြောစမ်းပါဦး၊ ရှင်ကျွန်မကို ဘာတွေများ လိုက်လျောခဲ့ပါလိမ့်"
သူရုတ်တရက် မျက်နှာနီမြန်းသွားအောင် ဒေါသထွက်သွား၏။
"ကောင်းပြီ ... မင်းသိချင်ရင် ကိုယ်ပြောပြမယ်၊ ပထမဦးဆုံး အချက်အနေနဲ့ မင်းက ဟောဒီ ဇာတိမြို့ကလေးကို ချစ်တယ်၊ ကိုယ်က မြို့ကြီးကို သဘောကျတယ်။ ကိုယ်နဲ့အတူ လိုက်နေသမျှ မင်းရဲ့ နှစ်နှစ်ကာလဟာ ကိုယ်ဘယ်လို
ကြိုးစားဆွဲခှေါခှေါ မင်းအတွက် နေသားတကျ မဖြစ်ဘူး၊ မင်းရဲ့ အသုံးဝင်မှုဟာ ဘာလဲဆိုတာ မင်းကိုယ်မင်း မသိဘူး၊ မင်းကိုယ်မင်း အားမရဘူး၊ မင်းဘဝကို မကျေနပ်ဘူး၊ ကိုယ့်အသိုင်းအဝိုင်းမှာ မင်းမပျှောဘူး၊ မင်းရဲ့ ညှိုးနွမ်းမှုကို ကိုယ်ကြာရှည် မြင်ရက်ပါ့မလား၊ မင်းနဲ့ အသင့်တှောဆုံး နေရာကို ကိုယ်သိအောင် ကြိုးစားပြီး ကိုယ်ဒီမှာနေဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်ရ တော့တာပေါ့။ ဒီမြို့ ရောက်တဲ့အခါ မင်းဟာ မင်းကိုယ်တိုင်ရဲ့ အရေးပါမှုကို ခံစားဖူးလာတယ်၊ ကျေနပ် တက်ကြွလာတယ်၊ မင်းရဲ့လက်တွေက သိုးမွေးချည်တွေကို ကိုင်တွယ်တဲ့ နေရာမှာ အကျွမ်းကျင်ဆုံး၊ မင်းမျက်လုံးက ဒီဇိုင်းပုံဆန်းတွေ အကွက်ဖှောတဲ့ နေရာမှာ အတောက်ပဆုံး၊ ဒါတွေကို ကိုယ်မသိဘဲနဲ့ ကိုယ့်အလုပ် ကိုယ့်ဆနဿဒကို ပစ်ပယ်ပြီး ဒီလို ချောင်ကျကျ နေရာမှာ လာနေပါ့မလား"
သူ့စကားများကို ကျွန်မ ယုံရမှာလား၊ မယုံရဘူးလား ဝေခွဲမရပါ။
"ကိုယ် ဒီမြို့ကလေးမှာ ကျောင်းဆရာ ဝင်လုပ်တာ ကိုယ့််အတွက်လို့ မင်းထင်နေသလား၊ မင်းက ကိုယ့်ကို မင်းနဲ့ အနီးဆုံး နေရာမှာ နေစေချင်တယ်၊ လောကအပှေါ၊ ပတ်ဝန်းကျင်အပှေါ ကိုယ်ဘယ်လို အသုံးကျလည်း မင်းမတွေးဘူး၊ မင်းအတွက် အသုံးကျဖို့ပဲ မင်းစဉ်းစားတယ်၊ အိုးမကွာ အိမ်မကွာ နေရတဲ့ အလုပ်မျိုး ကိုယ်လုပ်မှ မင်းစိတ်ချမ်းသာတယ်၊ မင်းက ကိုယ်ခရီး ထွက်မှာကို သေမလောက် ကြောက်တယ်၊ ခရီးက ပြန်လာရင် ဘယ်အရေးကြီးတဲ့ ကိစဿစကိုမှ မလုပ်ဘဲ မင်းဆီကို ချက်ချင်း အရောက်လာစေချင်တယ်၊ ခရီးက ပြန်လာတဲ့အခါ အသေးအဖွဲ ပစဿစည်းလေးတွေကိုပဲ ဖြစ်ဖြစ် ကိုယ့်အမှတ်တရ လက်ဆောင်အဖြစ် မင်းမက်မောတယ်၊ မင်းဘာကို သဘောကျတယ်ဆိုတာ ကိုယ်အမြဲ လေ့လာပြီး မင်းသဘောကျအောင် ကြိုးစား နေထိုင်ခဲ့တယ်၊ ဥပမာကွာ- လူရှေ့သူရှေ့ ထမင်းစားတဲ့အခါ မင်းပန်းကန်ထဲကို ကိုယ်ဟင်းထည့်ပေးတဲ့ ကိုယ့်အပြုအမူကို မင်းမက်မောတယ်၊ ကိုယ့်ပန်းကန်ထဲကို ဟင်းထည့်မပေးဘဲ မာနကြီးနေတဲ့ မင်းအပြုအမူကို မင်းမက်မောတယ်၊ ဘတ်စ်ကားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ရထားနဲ့ ဖြစ်ဖြစ် ခရီးရှည် သွားရတဲ့အခါ မင်းအနားမှာ ကိုယ်ထိုင်နေတာနဲ့တင် မင်းကျေနပ်တယ်၊ တတွတ်တွတ် စကားများတာကို မင်းမကြိုက်ဘူး၊ ပူးပူးကပ်ကပ် ယုယတာမျိုးကို မင်းမကြိုက်ဘူး၊ ဒီလင်မယား နှစ်ယောက်က အေးတိအေးစက် နိုင်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ ဘေးက ထင်မြင်ချက်မျိုးကို မင်းမက်မောတယ်၊ လမ်းခရီးမှာ တွေ့ရတဲ့ မြင်ကွင်းတွေအကြောင်း တစ်ယောက်တည်း တွေးနေရတာကို စကားပြောရတာထက် ပိုကြိုက်တယ်၊ ဘေးခရီးသွားဖှောတွေနဲ့ ကိုယ်စကား လက်ဆုံ ကျတာကို မင်းမကြိုက်ဘူး။ မင်းမကြိုက်လိုက်တာ ဆိုတဲ့ အပြုအမူမျိုး ကိုယ့်ဆီမှာ ဘယ်နှစ်ခါ တွေ့ဖူးလို့လဲ"
ကျွန်မ မပြုံးဘဲ မနေနိုင်တော့ပါ။
"မိဘ ဆွေမျိုး အသိုင်းအဝိုင်းကြားမှာ ပြသဿသနာ ဖြစ်တဲ့အခါ၊ မင်းစိတ်ညစ် ရတဲ့အခါ မင်းက မာနကြီး တစ်ခွဲသားနဲ့ ပြောပြ တိုင်ပင်ဖို့ ဝန်လေးတတ်ပေမယ့် ကိုယ်က မင်းအရိပ်အကဲကို သိတယ်။ မင်းရဲ့ ဒေါသတွေ ကိုယ့်ဆီ လမ်းလွှဲလာအောင် ကိုယ်က မျှယူပေးရတယ်။ မင်းကို ဆရာလုပ်တာ မင်းမကြိုက်ဘူး၊ အထက်စီး လေသံနဲ့ ကိုယ်အကြံပေးမိရင် အဲဒီအကြံပေးချက်ကို မင်းကပြောင်းပြန်ဖြစ်အောင် လုပ်ပစ်တတ်တယ်။ မှားသွားတော့မှ ကိုယ်မသိအောင် ကျိတ်ခံတယ်၊ ဒါတွေကို ကိုယ်မသိဘဲ နေပါ့မလား၊ မင်းပြသဿသနာကို ကိုယ်ဖြေရှင်းပေးတဲ့ အခါတိုင်း ကိုယ်ဖြေရှင်းပေးတယ်လို့ မထင်ရအောင်၊ မင်းရဲ့ ကိုယ်ပိုင် စိတ်ကူးတွေလို့ ထင်အောင် ကိုယ်ဆွဲခှေါ သွားခဲ့တယ်၊ မင်းရဲ့ ဝမ်းနည်းမှု၊ နာကျည်းမှုတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အချိန်မကြာ ခဲ့ရပါဘူး၊ မင်းဘဝမှာ အားလုံး ကျေနပ် နှစ်သိမ့်အောင် ကိုယ်ကြိုးစား ခဲ့ရတာ ချည်းပါပဲ "
ထူးဆန်းသော စကားများကို သူတောက်လျှောက် ပြောသွားပြီး သူ့သစ်ပင်ကို ရေလောင်းဖို့ ပြင်ဆင်သောအခါ စကားဆက် ပြတ်သွားတော့သည်။ ထိုအကြောင်းများကို နောက်ထပ်လည်း စကားမစပ်မိ ကြတော့ပါ။ ကျွန်မ မနှစ်သက်သော ဤသစ်ပင်ကို ဤအခန်းထဲ ကာလ ကြာရှည်စွာ ထားနေသေးတော့ သူ့အပြုအမူနှင့် သူပြောသွားသော စကားများကို ဖြစ်နိုင် မဖြစ်နိုင် ချိန်ဆရင်း ကာလများစွာ ကုန်ခဲ့ရပြန်သည်။
ကျွန်မတို့ အခန်းထဲသို့ ထိုအပင်ရောက်လာပြီး သုံးနှစ်ကျှောသော အခါမှာတော့ ကျွန်မ၏ သည်းခံနိုင်စွမ်း ကုန်ဆုံးသွားသည်။ သည်လောက်ဆို တှောလောက်ပြီဟု ကျွန်မ ဆုံးဖြတ်ကာ ကျွန်မ အခန်းပြောင်း လိုက်ပါတော့သည်။ သည်တော့လည်း သူက မတုန်မလှုပ် ဆေးလိပ်သောက်ရင်း ကျန်နေခဲ့လေသည်။
သည်တစ်ခါ ကျွန်မ အခန်းထဲသို့ နောက်ထပ် အပင်တစ်ပင် ယူလာလျှင်တော့ သူနှင့်ကျွန်မ အပြတ်ပဲဟု စိတ်ကူးဖြင့် ကြိုတင် ကြိမ်းဝါးရင်း ဒေါသ ထွက်နေခဲ့သှောလည်း သူ ဘာပင်မှ သယ်မလာတော့ပါ။ သူ့အပင်ကို မမြင်ရတာ ကြာတော့လည်း ကျွန်မ ဒေါသတွေပြေကာ မေ့စ ပြုလာသည်။ တစ်ခါတစ်ရံ ထမင်းဝိုင်းမှာ သစ်ပင်တွေအကြောင်း သူပြောပြ နေလျှင်တော့ ကျွန်မ ရုတ်တရက် သတိရသွားကာ သူ့အခန်းထဲက တစောင်းပင်ကြီး အခြေအနေကို လူမမာမေးသလို မေးမိသည်။ သူ့ထံမှ မထူးခြားသော အဖြေကိုသာ တသမတ်တည်း ရ၏။
သူကွယ်လွန်မည့် နေ့က ညဉ့်အတှော နက်သည်အထိ ခြံထဲမှာ သူရှိနေသည်။ ထိုညက လသာ၏။ ပင်လယ်ကဗွီး ပင်ကြီးအောက်တွင် ပက်လက် ကုလားထိုင်ပှေါ၌ ထိုင်ရင်း သူအိပ်ပျှော သွားခဲ့သည်။ ကျွန်မ အိပ်ယာ ဝင်သည်အထိ သူခြံထဲက တက်မလာသေးပါ။ ပထမတော့ သူ့ကို ခှေါဖို့ သွားလျှင် သူတစ်မျိုး တစ်မည် ထင်မည်စိုး၍ ပေကတ်အိပ်ဖို့ ကြိုးစားသေး၏။ နောက်တော့ နှင်းတောထဲတွင် သူ့ကို စိတ်ချလက်ချ ထားပြီး မအိပ်နိုင်တော့သဖြင့် သွားခှေါရသည်။ ကျွန်မနှိုးတော့ သူ့လက်ဖျားများ အေးစက်လျက် ရှိသည်။ သူက လွယ်လွယ်ကူကူပင် ထလိုက်လာ၏။ ကျေးဇူးပဲ ဟုပင် ပြောခဲ့ပါသေးသည်။ နောက်တစ်နေ့ သူအခန်းထဲမှ ထွက်မလာ၍ ဝင်ကြည့်တော့ သူအိပ်ယာပှေါမှာ မလှုပ်ရှား နိုင်တော့ဘဲ ဝူးဝူးဝါးဝါး ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်မ ထိတ်လန့် ငိုကြွေးကာ ဆရာဝန် ပင့်တော့ ဆရာဝန်က မရနိုင်တော့ဟု အသိပေးသည်။ ဦးနှောက်သွေးကြော ပြတ်ပြီတဲ့။ ထိုည သန်းခေါင် အချိန်တွင် သူကွယ်လွန် ခဲ့ပါသည်။ တကယ်တမ်း သူကွယ်လွန်သည့် အခါမှာတော့ ကျွန်မ သူ့အပင်များကို ဓားနှင့် မခုတ် ဖြစ်တော့ပါ။ အပင် တစ်ပင်တိုင်းသည် သူ့လက်နှင့် ထိတွေ့ ပြုစုထားလို့လား မသိ၊ ကျွန်မနှင့် အလွန်ရင်းနှီး နေသလို ခံစားရပါသည်။ အပင်တိုင်းကို ကျွန်မ ကိုင်တွယ် ချဉ်းကပ် လေသမျှ သူ့အရိပ်အငွေ့များ ထင်ဟပ်ကာ နွေးထွေးနေတော့သည်။
ကျွန်မ သစ်ပင် မုန်းတီးကြောင်း သူပြောပြ ထားခဲ့လေသလား မသိ။ သူ့မိတ်ဆွေ တချို့က ကျွန်မထံ ဟိုအပင်လာတောင်း ဒီအပင်လာတောင်း လုပ်သေး၏။ ကျွန်မ ဘယ်သူကိုမျှ ဘာအပင်မျှ မပေးခဲ့ပါ။ သူ့ဘဝ၏ တစ်ဝက် တစ်ပိုင်းသည် ကျွန်မဖြစ်၍ ကျန်တစ်ပိုင်းသည် သစ်ပင်များ ဖြစ်သည်။ သားသမီးသဖွယ် သူသဘော ထားခဲ့သော သစ်ပင်များကို ကျွန်မ မစွန့်ပစ်ရက်ပါ။ ကျွန်မသည် သူ့အပှေါ ချစ်မြတ်နိုး တမ်းတစိတ်ဖြင့် ဥယျာဉ်ထဲမှ အပင်များကို လိုက်လံငေးမော ရေတွက်ရင်း မျက်ရည် ကျခဲ့ရသော ရက်များလည်း မနည်းလှပါ။ သူမရှိသောအခါ အပင်များသည် တဖြည်းဖြည်း ညှိုးငယ်လာသည်။ အပင်များကို နေ့စဉ် ကြည့်ရှုနေရင်းက သူတို့ တစ်ယောက်ယောက်ကို လိုအပ်နေပြီဟု ကျွန်မ နားလည်လာသည်။ ခက်တာက မည်သည့်အပင်ကို မည်သည့် ပိုးသတ်ဆေး ဖျန်းပေးရမည်နည်း၊ မည်သည့် အကိုင်းအခက်ကို မည်သည့်အချိန်တွင် ဖြတ်တောက်ပေး ရမည်နည်း၊ ကျွန်မ ဘာမှ မသိပါ။ မာလီတစ်ယောက်လောက် ငှားပေးရမည်လား။ သို့သှော သူ့လက်ဖြင့် ကိုင်တွယ် ပျိုးယူခဲ့သော အပင်များကို ကျွန်မလက်ဖြင့်သာ ထိတွေ့ပြုစုလိုပါသည်။ နောက်တော့ သူ့နေရာကို ကျွန်မဝင်ဖို့ ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ကံကောင်း ထောက်မစွာပင် အမြှောအမြင်ကြီးလှသော သူက အပင်တိုင်းတွင် နာမည် ကတ်ပြားများ ချိတ်ဆွဲ ထားခဲ့လေသည်။ ကျွန်မက ထိုကတ်ပြားမှ နာမည်ကို ဖတ်ကာ သူ့စာအုပ်စင်မှ ရုကဿခဗေဒ စာအုပ်များ၊ ဥယျာဉ် စိုက်ပျိုးနည်း စာအုပ်များဖြင့် တိုက်၍ လေ့လာ ဖတ်ရှုရသည်။ ရုကဿခဗေဒ နာမည်များသည် ကျွန်မ ခေါင်းကိုက် ရလောက်အောင် ရှည်လျား ရှုပ်ထွေးလှ၏။ အပင်တစ်ပင်၏ နာမည်ကို စာအုပ်ထဲတွင် တွေ့ရပြီး ပြုစုနည်းကို ဖတ်ရှု သိရှိ ရသောအခါ ကျွန်မ စိတ်ကြည်နူး ချမ်းမြေ့ရသည်။ တချို့ပန်းပင်ကို သူက သံစည်ပိုင်းဖြင့် စိုက်ပျိုးပြီး တချို့ပန်းပင်ကို မြေကြီးတွင်ချ၍ စိုက်ပျိုးခဲ့သည်။ တချို့ပန်းပင်ကို မြေပန်းအိုးဖြင့် စိုက်ပျိုးပြီး တချို့ကို သစ်ပင်ကြီးများတွင် ကပ်၍လည်းကောင်း၊ သစ်ချောင်းခွက်လေးများ ပြုလုပ်၍ ကြိုးဖြင့် ချိတ်ဆွဲ၍လည်းကောင်း စိုက်ခဲ့သည်။ လိုအပ်သော အပူချိန်၊ အစိုဓါတ်၊ အမြစ်၏ ရေထိန်းသိမ်းနိုင်စွမ်းအား စသည်တို့ကို ယခုတော့ ကျွန်မနားလည် ခဲ့ပါပြီ။ အပင်တွင် တွယ်ကပ်နေသော ပိုးဥများ၊ ပျားဥများကို ကျွန်မရှာဖွေ ဖယ်ရှားတတ်ပြီ။ ဒီတီတီ ပိုးသတ်ဆေး လိုသော အပင်နှင့် ဆာလဖာမှုန့် လိုသော အပင်ကို ခွဲခြားတတ်ပြီ။ ရေဝပ်ရမည့်အပင်၊ ရေစီးကြောင်း ဖွင့်ပေးဖို့ လိုအပ်သည့်အပင် ခွဲခြားတတ်ပြီ။ အရိပ်ကြောက်သော အပင်နှင့် အရိပ်ခံနိုင်ရည် ရှိသော အပင်ကိုလည်း ခွဲခြားတတ်ပြီ။
တကယ်တော့ သစ်ပင်များသည် စိတ်ဝင်စားဖို့ ကောင်းပါသည်။ သူသည် ကျောင်းမှာ ကျောင်းသူကျောင်းသား များကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းပြီး အိမ်မှာ အပင်များကို ထိန်းသိမ်းသူ ဖြစ်သည်။ သူ့သစ်ပင်များကို သူမြတ်နိုး သလိုပင် ကျွန်မ တွယ်တာ နေမိပြီ ဖြစ်ကြောင်း သူသိစေချင် လှသည်။ ကျွန်မက သူ့ထက်သာသည့် အချက်မှာ မိန်းမပီပီ အနေအထား အလှအပ ခန့်မှန်းတတ်ပြီး လှပစွာနှင့် မှန်ကန်စွာ နေရာချထား ပေးတတ်ခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ သစ်ပင်များကို ပြုပြင် ထိန်းသိမ်းရင်း သူ့ကို မေ့အောင် ကြိုးစားနေခိုက် တစ်ညမှာတော့ ကျွန်မသူ့ကို အိပ်မက် မက်ပါသည်။
နိုးလာသော အချိန်ကျမှသာ အိပ်မက်ဟု သိလိုက်ရသှောလည်း တကယ်ဖြစ်နေသလို ကျွန်မ ခံစားနေခဲ့ရတာ ကျွန်မ မှတ်မိသည်။ အိပ်မက်ထဲမှာ သူ့အဝတ်အစားတွေက ကပိုကရို။ ဟိုတုန်းကလိုပဲ သူ့အခန်းထဲက ကုတင်ပှေါတွင် သူငုပ်တုတ်ထိုင်၍ ဆေးလိပ် သောက်နေသည်။ ကျွန်မက သူ့ဆေးလိပ်ကို ဆွဲယူ လွှင့်ပစ်ရန် ကြိုးစားတော့ သူက ခေါင်းမာစွာ ပြုံးသည်။ ကျွန်မက အပြင်မှာလိုပင် ဒေါသကြီးလျက်နှင့် သူ့ကို အခန်းထဲက နှင်ထုတ်သည်တဲ့။ သည်တော့ သူက အထက်စီး အပြုံးဖြင့် ခေါင်းခါယမ်းသည်။
"ဘာဆိုင်လို့လဲ၊ ဒါကိုယ့်အခန်းလေ၊ ဆေးလိပ်နံ့ မခံနိုင်ရင် မင်းအခန်းထဲ မင်းသွားနေပေါ့" တဲ့။
ထိုည သန်းခေါင်ကျှောတွင် ကျွန်မ ဗြုန်းကနဲ လန့်နိုးလာတော့ သူ့ဆေးလိပ်နံ့ကိုပင် ရသလို ခံစားရသည်။ တစ်ယောက်တည်း အထီးကျန် ရက်များစွာ ကုန်လွန်အောင် ကျွန်မ၏ အခန်းထဲမှာ တိတ်ဆိတ်ခက်ခဲစွာ ရင်ဆိုင် ဖြတ်ကျှော ခဲ့ရသည်ကို တွေးမိတော့ ရင်ထဲ တင်းကျပ် ဆို့နင့်ကာ ချက်ချင်း ငိုချ ပစ်လိုက်ချင်၏။ တိတ်ဆိတ် ကြေကွဲဖွယ်ညတွင် ငြိမ်သက်စွာ ငေးမော ဝမ်းနည်းရင်းက ခေါင်းရင်းအခန်းထဲသို့ ကျွန်မ မဝင်ဖြစ်တာ ကြာပြီပဲဟု သတိရမိသည်။ ထိုအခန်းထဲသို့ ယခုနေ ကျွန်မ ဝင်သွားလျှင် အိပ်မက်ထဲကလိုပင် ကုတင်ပှေါမှာ ထိုင်နေသော သူ့ကို မြင်ရမလားဟု မရေမရာ စိတ်ကူး ဆန်းပြားလျက် သွားလည်း သွားချင်၊ မသွားလည်း မသွားရဲဘဲ ဖြစ်နေသည်။ ကျွန်မသည် ငြိမ်သက်စွာ လှဲလျောင်းရင်းက တဒိတ်ဒိတ် ရင်ခုန် လှုပ်ရှားလာကာ လက်ဖျားတွေ အေးစက် တုန်ခိုက်လာ၏။
ကျွန်မ ကြောက်နေတာလား။ မဖြစ်နိုင်ပါ။ ကျွန်မသည် သူ့ကို ချစ်မြတ်နိုးစွာ လွမ်းဆွတ်နေဆဲ ဖြစ်သောကြောင့် သူနှင့် ဗြုန်းကနဲ ရင်ဆိုင်တွေ့ဖို့ အကြိမ်များစွာ မျှောလင့် ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးပါသည်။ ထိုညက ပြန်လည် အိပ်ပျှောအောင် ကြိုးစားရင်း တဖြည်းဖြည်း မျက်စိကြောင်လာကာ နာရီသံကို နားစွင့်လျက် မြန်မြန် မိုးလင်းပါစေဟု ဆုတောင်းနေရသည်။ ကျွန်မ ဆုတောင်း မပြည့်ပါ။ အချိန်သည် ကုန်ခဲလှသည်။ နောက်ဆုံး ဘယ်လိုမှ သည်းမခံ နိုင်သောအခါ ကျွန်မ ဝုန်းကနဲ ထထိုင်လိုက်မိသည်။ သူ့အခန်းမှာ ဖုန်တွေ ထုတက်လို့ ရှိမှာပဲ။ အလွန်အသန့်အရှင်း ကြိုက်တဲ့သူဟာ သူ့အခန်းကို ဒီလို တံခါးပိတ်ပြီး ပစ်စလက်ခတ် ထားတာ တွေ့ရင် ဘယ်လောက်များ ဒေါသကြီးလိုက်မလဲ။ ကျွန်မ သူ့အခန်းသို့ အားတင်း၍ ဝင်ရောက်သွားပါသည်။
တံခါး ဖွင့်လျှင် ဖွင့်ချင်း ကျွန်မ သတိထားမိသည်မှာ ထူးဆန်းသော အနံ့တစ်မျိုး ဖြစ်သည်။ အိပ်မက်ထဲကလို ဆေးလိပ်နံ့ မရပါ။ ရေမွှေးနံ့လိုလို၊ ပန်းနံ့လိုလို သင်းမွှေးသော ရနံ့ဖြစ်သည်။ ကျွန်မ စိတ်ထင်တာများလားဟု ကြောက်လန့်တကြား ရှူရှိုက်ကြည့်တော့ တကယ့်ကို ပြေပြစ်သော မွှေးရနံ့ ဖြစ်သည်။ ကျွန်မ ရင်တဒိတ်ဒိတ် ခုန်ရင်းက မီးခလုတ်ကို စမ်းကာ ဆွဲချ ဖွင့်လိုက်သည်။ လင်းထိန်သွားသော မီးရောင်အောက်တွင် သူ့ကုတင်သည် ဘာပစဿစည်းမှ မရှိဘဲ အထီးကျန်စွာ ရှင်းလင်း နေလေသည်။ သူနှင့်တူသော အရိပ်အယောင်လေးမျှ မရှိ၊ ထူးခြား ဆန်းကြယ်သော အရာဟူ၍လည်း မရှိ။ မြင်နေကျ အရာများဖြင့် ခြောက်သွေ့ တိတ်ဆိတ်သော အခန်းသည် ကြေကွဲဖွယ်ရာ ညှိုးငယ်နေသည်။ ထူးခြားတာ တစ်ခုကတော့ မွှေးရနံ့ပဲ ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်မသည် အသက်ကင်းမဲ့နေသော အခန်းကို ငေးမော နေရာမှ ပင့်သက် တစ်ချက် ရှိုက်ကာ ပြန်လှည့်ထွက်ဖို့ ပြင်ဆင်လိုက်သည်။ ထိုအချိန်မှာပင် ကျွန်မ၏ မျက်စိထောင့်တွင် တစ်စုံတစ်ခု လှုပ်ရှားသွားသလို ရိပ်ခနဲ မြင်လိုက်ရ၏။ နှလုံးခုန် ခဏ ရပ်သွားသည်။ အသက်ရှူဖို့ပင် မေ့လျော့သွားကာ အားတင်း၍ လှမ်းကြည့်လိုက်ပါသည်။ ထိုအရာကို ခေါင်းရင်း ထောင့်ဆီမှာ မြင်လိုက်ရသည်။ ရှည်မျောသော ထိုအရာသည် ကျွန်မကို ချောက်ခြား ရလောက်အောင်ပင် လေဖြင့် လှုပ်ရှားခဲ့ဟန် တူပါသည်။
သူ့ကို ကျွန်မ မေ့နေခဲ့သည်မှာ မည်မျှ ကြာပြီနည်း။
အရုပ်ဆိုးလှသော အပင်ကြီးသည် လက်တံများ ဖြာထွက်လျက် အုတ်နံရံတွင် မျက်နှာကျက် ထိလုနီးပါး တွယ်တက် တွန့်လိမ်နေသည်။ တဒိုင်းဒိုင်း ခုန်သွားသော နှလုံးရှိရာသို့ ငြိမ်သက်အောင် လက်ဖြင့်ဖိလျက် ထိုအပင်ကြီးကို ထိတ်လန့်စွာ ကြည့်မိသောအခါ ကျွန်မသည် ထူးခြားမှုကို မြင်ရသည်။ အမွှေးအမျှင်များ၊ ဆူးချွန်များဖြင့် စိမ်းမှောင်နေသော လက်တံကိုင်းများအကြားတွင် ရှည်မျောမျော အဖြူရောင် အရာတစ်ခု တွဲလောင်းကျနေ၏။ ကျွန်မ ခြေလှမ်း တစ်လှမ်းချင်း တွန့်ဆုတ်စွာ လှမ်း၍ တိုးကပ်သွားမိသည်။ အပင်နှင့် နီးလာလေလေ မွှေးရနံ့က ပို၍ သင်းပျံ့လာလေလေ ဖြစ်သည်။ လက်တစ်ကမ်း အကွာမှာ ကျွန်မသည် သတိဖြင့် ရပ်တန့်လိုက်၏။ မြင်ရသော အရာကို မယုံကြည်နိုင်စွာ ငေးစိုက်ကြည့်နေ ခဲ့မိလေသည်။
နောက်ဆုံးတော့ ရှားစောင်းပင်ကြီးမှာ ပန်းပွင့် ပွင့်လာခဲ့ပြီ။
ပန်းပွင့်သည် ဖြူဖွေးကာ ရှည်လျားလှ၏။ လက်တစ်ထွာ ကျှောကျှောလောက် ရှိသည်။ ကျွန်မသည် ပန်းပွင့်ကို မဝံ့မရဲ လက်ဖျားဖြင့် တို့ထိ ကြည့်မိ၏။ နူးညံ့သော ပွင့်ဖတ်၏ အတွေ့သည် အေးစက်နေသည်။ ထို့နောက် ပင်စည်လား အရွက်လား ကျွန်မ မခွဲခြားတတ်သော အမွှေးဖုံးလွှမ်းသည့် အစိမ်းရောင် လက်တံများကို တဖြည်းဖြည်းချင်း တို့ထိ ကြည့်မိသည်။ အပင်ကြီးသည် ရေလောင်းမည့်သူနှင့် ကင်းဝေးနေပြီး ပင့်ကူမျှင်များ တိုးလို့တွဲလောင်း ငြိတွယ် အိမ်ဖွဲ့လျက် ရှိသည်။ ကြည့်နေရင်းမှာပင် ကျွန်မ၏ စိတ်ကို ဆုံးဖြတ်ချက် ချလိုက်ပြီး ဖြစ်သွား၏။ မနက်ဖြန်မှစပြီး ကျွန်မ ဤအခန်းထဲသို့ ပြောင်းရွှေ့တော့မည်။
နောက်တစ်နေ့ နံနက် ကျွန်မ အခန်းထဲသို့ ဝင်ရောက်သွားသောအခါ ထူးဆန်းမှုတစ်ခု တွေ့ရပြန်၏။ ညတုန်းက လန်းဆန်းစွာ ပွင့်ခဲ့သော ပန်းပွင့်ဖြူကြီးသည် ငုံပိတ်လျက် ရှိလေသည်။ ပထမတော့ ကျွန်မ ထိတ်လန့် တုန်လှုပ်သွား၏။ နောက်ပိုင်းတော့ စာအုပ်များမှတဆင့် အဖြစ်အပျက်မှန်ကို နားလည်လာပါသည်။
ပန်းအိုးပှေါမှ နာမည်အရ ဤအပင်သည် ရှားစောင်းဘုရင်မဟု ခှေါသော သစ်ပင်ဖြစ်သည်။ ရုကဿခဗေဒ နာမည်မှာ စီရီရပ်စ် ဂရမ်ဒီဖလိုးရပ်စ် ( Cereus Grandiflorus ) ဖြစ်သည်။ နွယ်တတ်သော သဘော ရှိသည်။ ရနံ့သင်းသော အဖြူရောင် ပန်းပွင့် ပွင့်သည်။ သို့သှော ပန်းပွင့်မှာ ညအချိန်ရောက်မှ ပွင့်သည်။ ရေများလွန်းခြင်းသည် အမြစ်ကို ပုပ်စေတတ်သည်။ ရေစီးကြောင်း ကောင်းသော အိုးတွင် စိုက်ပျိုးရမည်။
ထိုနေ့မှစ၍ ကျွန်မ ဤအခန်းကို ရှင်းလင်းကာ သူ့အပင်ကို စနစ်တကျ ပြုစု စောင့်ရှောက် ခဲ့ပါသည်။ ညတွင် ထိုးပန်းအနံ့က နှစ်သက် မိန်းမူးဖွယ် ကောင်းလှသည်။ ကျွန်မသည် တစ်ခါတစ်ရံ အခန်းမီး ပိတ်လျက် ပြူတင်းပေါက် ဖွင့်ကာ လရောင်အောက်က ထိုအပင်ကို တိတ်ဆိတ်စွာ ငေးမော နေတတ်ပါသည်။ တွန့်လိမ် ကြမ်းတမ်းသော ထိုအပင်ကြီးမှ လှပ မွှေးပျံ့သော ပန်းပွင့်ဖြူ တစ်ပွင့် ပွင့်လာသည်မှာ မယုံနိုင်စရာပင် ဖြစ်သည်။ တစ်ခါတစ်ရံ လေပြင်း တိုက်ခတ်မှုကြောင့် ထိုအပင်၏ အကိုင်းအခက် အလက်များ အနည်းငယ် လှုပ်ရှားသွားလျှင် ခပ်တိုးတိုး ရယ်မောသံကို ကြားလိုက်ရသလို ရှိသည်။ အသားများပြီး အရည်ရွှမ်းသော ထိုအချောင်းများ ထဲတွင် ရေတွေ ရှိနေဟန် ထင်ရသည်။ ပင်စည်ထဲက နူးညံ့ညင်သာသော ရေသံသည် သူရယ်မော လိုက်သော အသံလိုပင် ချိုမြ၏။ ထိုအသံမှာ နားထောင် ကောင်းသောကြောင့် တစ်ခါတစ်ရံ လေမတိုက်သည့် ညများတွင် ကျွန်မလက်ဖြင့် အသာအယာ လှုပ်ရှားပေးပြီး နားထောင်လေ့ ရှိပါသည်။
တဖြည်းဖြည်း ကျွန်မနှင့် ထိုအပင် ရင်းနှီးလာသည်။ သူသည် တစ်ခါ ပန်းပွင့်လျှင် ရက်အကြာကြီး ခံသည်။ နံနက်မိုးလင်း၍ အိပ်ယာမှ နိုးချိန်တွင် ပန်းပွင့်သည် ငုံသွားတတ်ပြီး ညအိပ်ယာ ဝင်ချိန်တွင် ပြန်ပွင့်လာပြန်သည်။ ထိုအချိန်မှာတော့ အခန်းထဲတွင် လေထုသည် မွှေးပျံ့လန်းဆန်း နေလေသည်။ ပန်းရနံ့၏ ထုံယစ်မှု အောက်တွင် ကျွန်မသည် ပူပင် သောကများ ကင်းစင်ကာ တဖြည်းဖြည်း အိပ်ပျှော သွားတော့သည်။ သူ့မွှေးရနံ့ဖြင့် အိပ်ပျှောရင်း မက်ရသော အိပ်မက်များသည် အမြဲလှပ နေတတ်သည်။
ဤအပင်သည် ပတ်ဝန်းကျင် အပူကို စုပ်ယူပေး၏။ အခန်းအပူချိန် မြင့်တက်လာပြီး ထိုင်းမှိုင်း လာချိန်တွင် သူက တွန့်လိမ်ရင်း ထောင်မတ်လျက် ရှိသည်။ အခြားအခန်း၏ အပူချိန်ထက် ဤအခန်း၏ အပူချိန်က ပို၍လျော့နည်း သွားသည်ဟု ကျွန်မ ထင်ပါသည်။ ပြင်ပ အပူချိန်ကို သူအားလုံး စုပ်ယူ လိုက်သလိုပင် ဖြစ်သည်။ တကယ်တော့ သူသည် အပူချိန်ကို သာမက အခြားအရာများကိုလည်း စုပ်ယူနိုင်ကြောင်း တဖြည်းဖြည်း ကျွန်မ သိလာပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့် ထိခိုက်ရှနာမှုများကို ခံစားရင်း အဆင်မပြေမှုများဖြင့် အထီးကျန်စွာ ရင်ဆိုင်နေရသော ကျွန်မသည် တစ်ခါတစ်ခါ ခင်ပွန်းဖြစ်သူအား အားကိုးတိုင်တည် လိုစိတ်ဖြင့် တမ်းတမိသည်။ ထိုသို့ တမ်းတမိတိုင်း ရှားစောင်းပင်ကြီး ရှေ့မှာ မတ်တပ်ရပ်ကာ တွန့်လိန်ကြမ်းရှသော လက်တံစိမ်းများကို ထိတို့ လှုပ်ရှားပေးရင်း ကြေကွဲစွာ ငေးမောမိသည်။ ပင်စည် အတွင်းမှ သူ့ရယ်သံနှင့် ဆင်ဆင်တူသော ခပ်တိုးတိုးဖွဖွ အသံများကို အာရုံစူးစိုက် နားထောင်နေမိသည်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ထိုခဏမှာ ကျွန်မ၏ စိတ်အားငယ်မှုများ ပြေပျောက် သွားရ တတ်လေသည်။ နာကျည်း ဒေါသများ၊ ဝမ်းနည်း တုန်လှုပ်မှုများလည်း တိုးတိတ်သည့် အသံအောက်မှာ လွင့်စင် ကွယ်ပျောက် ခဲ့ရတတ်ပါသည်။
တစ်ခါတစ်ခါတော့ သူ့သစ်ပင်များကို ပြုစုစောင့်ရှောက်ရင်း သူ့အကြောင်းကို မကြာခဏ စဉ်းစားမိပါသည်။ သူ့ဘဝတွင် သူအလိုချင်ဆုံးက ဘာလဲ၊ သူအဖြစ်ချင်ဆုံး ဘဝက ဘာလဲ၊ သူအတောင့်တဆုံး ဆနဿဒက ဘာလဲ၊ ကျွန်မကို သူဘယ်လို ဖြစ်စေချင် ခဲ့သလဲ၊ ကျွန်မ ပြောစေချင်သော စကားများက ဘာလဲ၊ လောကအလယ်တွင် ကျွန်မကို ရပ်တည်စေချင်သော ပုံစံက ဘာလဲ။ သူ့အကြောင်းကို စဉ်းစား ကြည့်ရသည်မှာ အဖြေမထွက်သော ပုစဿဆာတစ်ပုဒ်ကို ထပ်တလဲလဲ တွက်နေရလို တဝဲလည်လည် ရှိလှသည်။ ယခုတော့ သူ့ဆနဿဒတွေကို ကျွန်မ အကဲခတ် သိနိုင်ဖို့ လုံးဝ နောက်ကျသွားခဲ့ပြီ။
၁၉၉၃၊ ဇွန်လ၊ မြားနတ်မောင်
Retyped & Digitized by NLS
Posted by NLS at 5/23/2009 01:15:00 PM No comments:
ပြည်သူ့လွှတ်တှောဆိုတာ ရွှေတိဂုံဘုရားရဲ့ အနောက်ဘက်က ပြည်လမ်းဘေး အဆောက်အအုံကြီးပေါ့။ ကားနဲ့ ဖြတ်ဖြတ်သွားတိုင်း မြင်နေရတာ။ ဧရိယာလည်း ကျယ်သလို ခန့်ညားမှုကလည်း အပြည့်။ ရန်ကုန်မှာ နေတယ်ဆိုပေမယ့် ပြည်သူ့လွှတ်တှောဆိုတာ ကျွန်တှောနဲ့ ဘာမှ မပတ်သက်တဲ့ နေရာတစ်ခုပါပဲ။ အဲဒီအထဲ ရောက်ဖူးဖို့ဆိုတာ စိတ်ကူးထဲမှာတောင် ရှိခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ရောက်ချင်တော့လည်း ကြံဖန် ရောက်သွားခဲ့ရတာ။ ပြီးတော့ ကံကောင်းထောက်မစွာ။
၁ဝတန်း စာမေးပွဲတွေ ဖြေပြီးတာနဲ့ သိပ်မကြာခင်ပဲ မြစ်ကြီးနားကနေ ရန်ကုန်ကို ၁လလောက် သွားနေဖြစ်တယ်။ ရန်ကုန်ကနေ ပြန်ရောက်ရောက်ချင်းပဲ ဆရာမ ဒှေါမြငွေ ကျွန်တှော့ကို လိုက်ရှာနေတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါနဲ့ ဆရာမအိမ်ကို သွားတော့ အာဆီယံ နှစ်သုံးဆယ်ပြည့်ဆိုလား သုံးဆယ့်တစ်နှစ်ပြည့်ဆိုလား အထိမ်းအမှတ် ဉာဏ်စမ်းပဟေဠိပြိုင်ပွဲ အတွက်တဲ့။ မြန်မာပြည်က အဲဒီနှစ်ကမှ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် ဖြစ်လာတာ။ ကျွန်တှော သိတော့ ရက်က ၂ရက်လားပဲ လိုတော့တယ်။ ကျွန်တှောတို့ ကျောင်းက လူတချို့ကို ရွေးထားပြီးသွားပြီ။ ကျွန်တှောကတော့ ချွင်းချက်ပေါ့။ ဖြတ်လမ်းကနေ မြို့နယ်အဆင့် ပြိုင်ရမှာ။ ဒါနဲ့ အာဆီယံနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ သတင်းစာထဲမှာ လိုက်ရှာဖတ်ရတယ်။ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေရောပေါ့။ မြန်မာပြည်နဲ့ ပတ်သက်တဲ့ ဗဟုသုတတွေတော့ ကျွန်တှောက သိပ်မကြောက်ဘူး။ အာဆီယံ ဆိုတာကလည်း မြန်မာပြည်က အဲဒီတုန်းကမှ ဝင်တဲ့ အဖွဲ့မို့ သတင်းစာတွေထဲမှာ မြိုင်မြိုင်ဆိုင်ဆိုင် ပါနေတာဆိုတော့ သတင်းစာ ဖတ်ရုံနဲ့တင် လုံလောက်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ အဂဿငလိပ်လိုတွေ မှတ်ရတယ်။ အာဆီယံအဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတွေရဲ့ ပထဝီနဲ့ ဒေသနဿတရ ဗဟုသုတတွေကို လိုက်ဖတ်ရတယ်။ ဝန်ကြီးချုပ်တွေ ထင်ရှားတဲ့သူတွေကို မှတ်ထားရတယ်။ ဘယ်တိုင်းမှာ ဘာရှိတယ်၊ ဘယ်မြို့နယ်မှာ ဘာရှိတယ် ဆိုတာတွေ လေ့လာရတယ်။ အချိန်ကလည်း သိပ်မရှိတော့ ကျွန်တှောလည်း ကပျာကယာ လုပ်ရတယ်။ သွားဖြေတော့ အထက (၁)ကျောင်းမှာ သွားဖြေရတယ်။ ကချင်ပြည်နယ် တစ်ခုလုံး လာဖြေကြတာဆိုတော့ လူတွေမှ အပြည့်ပဲ။ ကျွန်တှောက အိမ်နားမှာနေတဲ့ အထက(၁)က အမကြီးတစ်ယောက်နဲ့ အတူတူသွားတယ်။ သူ့နာမည် စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ရင် ဆိုတဲ့ တစ်လုံးတော့ ပါသလိုပဲ။
ဖြေပြီး တစ်ရက်နှစ်ရက်ကြာတော့ ဆရာမက အိမ်ကို ဝမ်းသာအားရ ဖုန်းဆက်လာတယ်။ ကျွန်တှောက ကချင်ပြည်နယ် ပထမရတယ်တဲ့။ အဲဒါ ရန်ကုန်ကို ဗဟိုအဆင့် သွားပြိုင်ရမယ်တဲ့။ ကျွန်တှောရတဲ့ အမှတ်ကလည်း မဆိုးလှဘူး။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံအဆင့် ပြိုင်ရမှာဆိုတော့ ထပ်လေ့လာထားဦးပေါ့။ ကျွန်တှောလည်း တှောတှော ပျှောသွားတယ်။ မြို့နယ်ပညာရေးမှူးရုံးသွား လိုအပ်တဲ့ ဖောင်တွေဘာတွေဖြည့် လုပ်ရတာပေါ့။ ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်း ခှေါပြီး အားပေးတယ်။ ရန်ကုန်ကို ကျွန်တှောနဲ့ ဆရာမ ဒှေါမြငွေ သွားရမယ်တဲ့။ ကျောင်းက တစ်ရက်ကို ဘယ်လောက်လဲ မမှတ်မိတော့ဘူး အသုံးစရိတ်ပေးတယ်။ ဆရာမက အဲဒီတုန်းက ဆရာချိုနဲ့ လက်မထပ်ရသေးဘူး။ ကျွန်တှောတို့ ဆယ်တန်းကို သမိုင်းသင်တယ်။ သူက ရန်ကုန်နဲ့ သိပ်အကျွမ်းမဝင်တော့ ရန်ကုန်သား ကျွန်တှော့ကို ဟိုရောက်ရင် ဟိုလျှောက်သွား ဒီလျှောက်သွား မလုပ်ရဘူးလို့ မှာတယ်။ ဆရာမရယ် ကျွန်တှောရယ် ရန်ကုန်ကို လေယာဉ်နဲ့ သွားကြတယ်လို့ ထင်မိတယ်။
ဟိုရောက်တော့ ကန်တှောကြီးပတ်လမ်းက အောက်မြန်မာနိုင်ငံပညာရေးရုံးကို သွားရတယ်။ အဲဒီမှာ ရောက်ကြောင်း သတင်းပို့ရတယ်။ ဖောင်တွေ ဖြည့်ရတယ်။ သူတို့က ကျွန်တှောတို့ တည်းခိုဖို့ကို နေရာစီစဉ်ပေးတယ်။ တည်းရတဲ့ နေရာကလည်း အမှတ်တရ နေရာလေးပါ။ မြေနီကုန်း ဘလေဇွန်နားက အထက(၁) ကမာရွတ် (မရမ်းခြံ) ဆိုတဲ့ မိန်းကလေးကျောင်း။ အဲဒီကျောင်းက ပြောရရင် ကဗျာဆန်တယ်။ ညဘက်ဆို စကားဝါပန်းနံ့လေးတွေ၊ ညမွှေးပန်းနံ့လေးတွေ သင်းလို့။ ကျွန်တှောတို့ အဲဒီကို ရောက်တော့ တခြား ပြည်နယ်တိုင်းတွေက ကျောင်းသားတွေ ဆရာ၊ ဆရာမတွေလည်း ရောက်နေကြပြီ။ အချင်းချင်း နှုတ်ဆက်ကြ၊ မိတ်ဆက်ကြပေါ့။ ကျွန်တှောနဲ့ ရွယ်တူ သုံးလေးယောက် ပါတယ်။ ရှမ်းပြည်နယ်က ရန်နိုင်အေး ပါတယ်။ မနဿတလေးက ဇာနည်ထွန်း ပါတယ်။ ဇှောလင်းဆိုတာ ပါတယ်။ ကျန်တဲ့သူတွေကို နာမည်သိပ်မမှတ်မိဘူး။ ကျွန်တှောတို့ အားလုံး ကြားထဲမှာ ထူးထူးခြားခြား ကောင်မလေးက တစ်ယောက်တည်း။ သူက မွန်ပြည်နယ်အတွက် လာတာ။ သူ့အမေ ပါလာတယ် ထင်တယ်။ သူ့နာမည်က ချိုနွယ်လှိုင် ဆိုလားပဲ။ သူ့ကို ကျွန်တှော တကဿကသိုလ်တက်နေတဲ့အချိန် မြောက်ဥကဿကလာ ဆေးတကဿကသိုလ် (၂)မှာ ပြန်တွေ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းကြောင့် သွားမနှုတ်ဆက်ဖြစ်ပါဘူး။ ရန်နိုင်အေးကို ကလောမှာ ပြန်တွေ့တယ်။ နောက်ပိုင်း သူ စစ်ဆေးတကဿကသိုလ် တက်သွားတယ်လို့ သတင်းကြားရတယ်။ ဇှောလင်းကိုတော့ ရေကြောင်းသိပဿပံမှာ ပြန်တွေ့တယ်။ သူက ကျွန်တှော့ထက် တစ်နှစ်ငယ်တော့ ကျွန်တှော့ ဂျူနီယာ။ ကျန်တဲ့ လူတွေနဲ့ ပထမတော့ စာအဆက်အသွယ် ရှိကြသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းတော့ ဝေးသွားတာပဲ။
ကျွန်တှောက ရန်ကုန်မှာလည်း နေခဲ့ဖူး၊ ဟိုစပ်စပ် ဒီစပ်စပ်လည်းသိ၊ စကားလည်း များတာမို့ အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်လို ဖြစ်သွားတယ်။ အဲဒီကျောင်းက စာသင်ခန်း တစ်ခုထဲမှာ ကျွန်တှောတို့တွေ စုပြီး နေကြတယ်။ ဆရာမတွေရယ် ကောင်မလေးရယ်က အပှေါထပ်မှာ။ ဘယ်သူယူလာတဲ့ သတင်းမှန်း မသိဘူး။ အဲဒီကျောင်းက သရဲအရမ်းခြောက်တယ်လို့ ကြားရတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တှောတို့ကတော့ ပျှောတာပဲ။ ညဘက် မအိပ်နိုင်ကြဘူး။ တစ်ယောက်အကြောင်း တစ်ယောက် ပြောကြ၊ ရယ်စရာ မောစရာတွေ ပြောလိုက်ကြ၊ စလိုက်နောက်လိုက်ကြနဲ့ သိတောင် မသိလိုက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြိုင်ပွဲကျရင်တော့ ပထမရအောင် လုပ်မယ်ဆိုပြီး အားလုံးက အပီအပြင် ပြင်ဆင်ထားကြတယ်။ ပထမတော့ ကျွန်တှောတို့အားလုံး ဗဟိုအဆင့်မှာ ထပ်ပြိုင်ဖို့ လုပ်ထားတာကို နောက်ပိုင်း ဘာကြောင့်မှန်း မသိဘူး အဲဒါ ပျက်သွားတယ်။ ကျွန်တှောတို့ ပြိုင်စရာ မလိုတော့ဘူးတဲ့။ ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအလိုက် ဆုတွေပေးတော့မယ်လို့ သတင်းထွက်လာတယ်။ ဒီလိုနဲ့ ကျွန်တှောတို့အားလုံး ပြည်သူ့လွှတ်တှောထဲ ရောက်ဖို့ အကြောင်း ဖန်လာပါတော့တယ်။
ပထမတစ်ရက်က ရီဟာဇယ် လေ့ကျင့်ရတယ်။ ဒုတိယ တစ်ရက်မှာတော့ ဆုပေးပွဲနဲ့ ညစာစားပွဲ တက်ရတယ်။ ကျွန်တှောက ကချင်ပြည်နယ်ဆိုတော့ ပထမဆုံး ဆုတက်ယူရတာပါပဲ။ ဆုပေးသူက အဲဒီတုန်းက အတွင်းရေးမှူး(၁) ဗိုလ်ချုပ်ခင်ညွန့်။ ညစာစားပွဲကလည်း အလျှံအပယ်ပါပဲ။ ခန်းမဆောင်ကြီးထဲမှာ။ ပြီးတော့ ကျွန်တှောတို့ ဓာတ်ပုံတွေ ရိုက်ကြတယ်။ မှတ်မိသေးတယ်။ အဲဒီတုန်းက အာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေ လုပ်လေ့လုပ်ထရှိတဲ့ လက်တွေကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် Crossing ချိတ်ပြီး ရိုက်ကြသလိုမျိုး။ ဟိုတစ်ယောက်တည်းသော ကောင်မလေးကတော့ အလယ်ကပေါ့။
အဲဒီနောက်ပိုင်း အဲဒီတုန်းက သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စာအဆက်အသွယ် လုပ်ကြသေးတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ဘယ်သူတွေက ဘယ်တွေရောက်ကုန်မှန်း မသိတော့ဘူး။ အဆက်အသွယ် ပြတ်သွားကြတာရယ်၊ ကျွန်တှော့ မှတ်ဉာဏ်တွေ ယိုယွင်းလာတာကြောင့်လည်း ပါတယ်။ ဒါလေးကိုတောင် မနည်းပြန်စဉ်းစားပြီး ရေးရတယ်။ ဘာရယ်မဟုတ်ပါဘူး။ ကိုယ့်ဘဝမှာ ရခဲ့ဖူးတဲ့ အမှတ်တရ အောင်မြင်မှုလေး တစ်ခုကို လုံးလုံး မမေ့သွားခင် မှတ်ထားလိုက်တဲ့ သဘောပါ။ တစ်ခါတစ်ခါတော့ အဲဒီဘက်ကို ဖြတ်သွားရင် အဲဒီတုန်းက ဆုရခဲ့တာလေး ပြန်ပြန်သတိရသလို ဆယ်တန်းကျောင်းသား ဘဝလေးကိုလည်း ပြန်လွမ်းမိတယ်။
ကျွန်တှောတို့နှစ်က မြစ်ကြီးနား အထက(၃)က တှောတှောလေး အောင်မြင်တယ်လို့ ပြောရမယ်။ ဆယ်တန်းမှာ တစ်နိုင်ငံလုံး ဒုတိယ ရတဲ့သူလည်း ထွက်လာတယ်။ ပြည်နယ်အဆင့်တွေလည်း အများကြီးပဲ။ သူငယ်ချင်း တှောတှောများများလည်း ဆရာဝန် ဖြစ်လာကြတယ်။ ကျွန်တှောကတော့ အဲဒီတစ်နှစ်လုံး ကဗျာပြိုင်ပွဲ၊ စာစီစာကုံး ပြိုင်ပွဲတွေမှာ ပထမအမြဲရလို့ ဆုပေးပွဲ လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ၁၂ဆုလောက် တက်ယူခဲ့ရတယ်။ ဘဝတလျှောက်လုံး ဆုအများဆုံး ရခဲ့တဲ့ နှစ်တစ်နှစ်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီတွေကြောင့်ပဲ ကျွန်တှော့ စာမေးပွဲမှာ အားနည်းခဲ့တာ။ စာမေးပွဲခန်းထဲ စာစီစာကုံးကို စိမ်ပြေနပြေနဲ့ ထိုင်ရေးနေခဲ့မိတာ နောက်ဆုံး အချိန်မလောက်တော့လို့ ကမန်းကတမ်း နိဂုံးချုပ်လိုက်ရတော့ မြန်မာစာ အမှတ်က ၇၃နဲ့ ဂုဏ်ထူးမှတ် လွဲခဲ့ရတယ်။ ကျွန်တှော့ဆရာမကြီး ဒှေါသိန်းမြင့်ဆိုတာ ဆူလို့ မဆုံးတော့ဘူး။ အားလုံးက ကျွန်တှော မြန်မာစာ ဂုဏ်ထူးရမယ် တွက်ထားကြတာကိုး။ ကျွန်တှောတို့နှစ်က သုံးဘာသာ ဂုဏ်ထူးတွေ များတာမို့ လေးဘာသာတွေပဲ မြို့နယ်မှာ ဆုပေးတော့ ကျွန်တှော့မှာ မြို့တှောခန်းမဘေးက စောစိုးနေဝါးတို့ အိမ်ရှေ့လမ်းမကြီးမှာ တစ်ယောက်တည်း ငိုခဲ့ရသေးတယ်။ ပြန်တွေးကြည့်တော့ ပေါလိုက်တာဗျာ။
Posted by NLS at 5/21/2009 07:11:00 PM 1 comment:
Posted by NLS at 5/21/2009 06:28:00 PM No comments:
အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံခဲ့ရတာ တစ်နှစ်ပြည့်တော့မယ်။ ဆက်တိုက်ဆိုသလို ကိုယ်ဘာမှ မလုပ်ရဘဲ ကိုယ့်စိတ်ကို ညစ်ညူးအောင် လုပ်ခဲ့ကြတဲ့ အရာတွေ မကုန်နိုင်သေးပါလားလို့ အံ့အားသင့်မိတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက် အိမ်ကလူတွေရဲ့ ပြသဿသနာပေါင်းစုံကို ဖြေရှင်းနေရတာနဲ့ တကယ်ကို ထွက်ပြေးချင်တယ်။ သူတို့ ပြသဿသနာတွေကို နားထောင်ရှင်းလင်းပေး နေရာတာနဲ့ပဲ ကိုယ့်ပြသဿသနာကိုတောင် ပြောပြခွင့် မရတော့ဘူး။ ပြောချင်စိတ်လည်း မရှိပါဘူး။ ကျွန်တှောက ကိုယ်ဖြစ်ကိုယ်ခံ၊ ကိုယ့်ပြသဿသနာကိုယ်ရှင်း၊ ကိုယ့်လှေကိုယ်ထိုး ဒါမျိုးပဲ။ ဒီလို ကျွန်တှောက မပြောတော့ သူတို့က ကျွန်တှော့မှာ ဘာအခက်အခဲမှ မရှိဘူး ထင်ကြတယ်။ ၁၅နှစ်သားထဲက တစ်ယောက်တည်း နေလာခဲ့တာ။ အခုကျမှ လူပေါင်းစုံနဲ့ ဆက်ဆံ နေရတော့ အရင်က တစ်ရက်နေလို့မှ စကားတစ်ခွန်းတောင် ပြောချင်မှ ပြောဖြစ်တဲ့ ကျွန်တှော အခုတော့ စကားပေါင်းစုံ ပြောရတယ်။ စကားပေါင်းစုံ ကြားရတယ်။
အိမ်မှာ အမွှေဘုရင် သူငယ်ချင်းတစ်ကောင် ရှိတယ်။ စောက်သုံးမကျတဲ့ မိန်းမတစ်ယောက်ကြောင့် ဒုကဿခမျိုးစုံ ကြုံရတဲ့ အကိုနဲ့ သူ့သား ရှိတယ်။ ထမင်းဟင်းချက်ဖို့ မိန်းမနှစ်ယောက် ခှေါထားရတယ်။ နှစ်ယောက်သာဆိုတယ် နှစ်သိန်းလောက် ရှိတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက် သူတို့ကို ပြောနေရတာနဲ့တင် တှောတှော ညစ်လာတယ်။ ကိုယ်အပြင်သွားရင် အိမ်ကဖုန်းနဲ့ နယ်တွေ ခှေါကြတယ်။ ကြိုသွင်းငွေ တစ်သိန်းခွဲ သွင်းထားတာကို ရလနဲ့ အကုန်ပြောပစ်တယ်။ ထားတော့ ပိုက်ဆံကုန်တာကို မပြောလိုဘူး။ အဲဒီမှာ နောက်ဆက်တွဲ ပြသဿသနာတွေက လာပါလေရော။
ဖုန်းခက တစ်သိန်းခွဲမှာ ၁၄၉ကျပ် ကျှောသွားလို့တဲ့ ဖုန်းက အပိတ်ခံလိုက်ရတယ်။ ဖုန်းအပိတ်ခံရတော့ ဖုန်းရုံးကိုသွားတယ်။ ဗိုလ်ဆွန်ပက်လမ်းက ဖုန်းရုံး။ အဲဒီရုံးက ကျွန်တှော မသွားချင်ဆုံး ရုံးတွေထဲက တစ်ခု။ တစ်ခါသွားမိရင် တစ်နေကုန်ပြီး လူတစ်ကိုယ်လုံး နွမ်းနယ်သွားလောက်အောင် ဒုကဿခပေးတဲ့ရုံး။ မတတ်နိုင်ဘူး အပိတ်ခံထားရတော့လည်း ဒဏ်ကြေးဆောင်ဖို့ သွားရပြန်တယ်။ ကျွန်တှော စဉ်းစားလို့ မရဘူး။ ဆက်သွယ်ရေးဆိုတာ အစိုးရကို နိုင်ငံခြားငွေ အများဆုံး ရှာပေးတဲ့ ဌာနတစ်ခု။ ဘယ်နိုင်ငံမှာမှ မကြားဖူးတဲ့ ဖုန်းတစ်လုံး ဒှေါလာ ၂၀၀၀ လောက် ပေးဝယ်ရတဲ့ဌာန။ တစ်ရက်တစ်ရက်ကို ဝင်ငွေ သိန်းရာပေါင်းများစွာ ရှာပေးတဲ့ဌာန။ ကျွန်တှောတို့က ဖုန်းကို အလကား ဆက်နေတာ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်တှောတို့က ကာစတမ်မာ။ ဒီကာစတမ်မာတွေကြောင့် ဒီဝင်ငွေ ရနေတယ် ဆိုတဲ့ ကမဿဘာတစ်ဝှန်းလုံး လက်ခံထားတဲ့ စီးပွားရေး သဘောတရားကို သူတို့ သဘောမပေါက်ဘူး။ ကျွန်တှော ငွေလက်ကျန်စစ်တဲ့ အခန်းက ဝင်ပေါက် တစ်ပေါက်ပဲ ရှိတယ်။ ပြူတင်းပေါက်တောင် မရှိဘူး။ အဲဒီအခန်းမှာ လူတွေနဲ့ ပြည့်ကျပ်နေတယ်။ ဝင်လိုက်တာနဲ့ အညှီနဲ့တွေ၊ ချွေးနံ့တွေ၊ လေပူတွေ ဝုန်းခနဲ နှာခေါင်းထဲကို တန်းဝင်လာလိုက်တာ ခေါင်းတောင် မူးနောက်သွားတယ်။ လူတိုင်းကို ကြည့်လိုက်ရင် ချွေးသံတရွှဲရွှဲနဲ့ ပင်ပန်းတကြီး တိုးဝှေ့နေရတယ်။ သူတို့ အလုပ်ခန်းထဲမှတော့ အဲယားကွန်းနဲ့ ဘာနဲ့။ အပြင်ကလူတွေကတော့ ကျွဲတွေ နွားတွေ ဖြစ်နေတယ်။ ကြွေးစာရင်းစစ်တာကလည်း စနစ်တကျ မရှိဘူး။ စစ်ပြီးလို့ စာအုပ်ပြန်ပေးတော့လည်း အှောနေတဲ့ မိန်းမက အခန်းထဲက။ ဘယ်လိုလုပ် အပြင်ကလူက ကြားရမလဲ။ အဲဒီတော့ ဘာလုပ်ရသလဲဆိုတော့ မြန်မြန်ပြီးအောင် သူအှောတာကို ကိုယ်က ထပ်ဆင့် အှောပေးရပြန်တယ်။ လှောစပီကာကြီးကို ဖြစ်လို့။ ကိုယ့်ထမင်းကိုယ်စားပြီး ဂျီးတှောနွား သွားကျောင်းပေးနေရတာ။ ချွေးတလုံးလုံးနဲ့ ရုပ်ပျက်ဆင်းပျက် တစ်နာရီလောက် ဖြစ်ပြီးတော့မှ စာအုပ်လေးက ထွက်လာတယ်။ ဒီစာအုပ် ထွက်လာရင် အကြွေးစာရင်းရှင်းဖို့ ထပ်ပြီး တစ်နာရီလောက် တန်းစီရဦးမယ်။ လူတန်းကြီး ဆိုတာကလည်း မြွေလိမ်မြွေကောက်တောင် မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ စိတ်ပျက်လက်ပျက် ပြန်ထွက်လာတော့တယ်။ ပိုက်ဆံ ၁၅၀၀ ပေးပြီး အန်ဒါဂရောင်း ချန်နယ်ကနေ သွားတော့မယ်။ ပြောချင်တာကဗျာ.. ဒီလောက် ပိုက်ဆံဝင်တဲ့ ဌာနက ဒီလို နေရာမှာ ပြည်သူလူထုကို၊ သူတို့ကို ငွေလာပေးတဲ့သူကို သက်သက်သာသာလေး အဆင်ပြေပြေ အလုပ်ပြီးစေဖို့ အဲယားကွန်းလေးတွေ ၁ဝလုံးလောက် တပ်ပေးမယ်၊ ခုံလေးတွေ လုပ်ထားပေးပြီးတော့ လာဆောင်တဲ့သူတွေကို သက်သက်သာသာလေး ထိုင်ခိုင်းထားမယ်၊ Token ယူတဲ့ စနစ်နဲ့ ပြီးတဲ့သူကို နံပတ်လေး ပြောမယ်ဆိုရင် ဘယ်လောက် ကောင်းလိုက်မလဲ။ ဒီစနစ်က ဘာမှ မခက်ခဲသလို ဘယ်လောက်မှလည်း ကုန်တဲ့ဟာ မဟုတ်ဘူး။ လူတွေလည်း ပိုက်ဆံပေးရတာခြင်း အတူတူ ကိုယ်ရောစိတ်ပါ သက်သာတယ်။ ကျွန်တှော အဲဒီအခန်းထဲမှာ ဘာတွေးနေမိတယ် ထင်လဲ။ ဒီအခန်းထဲက လူတစ်ယောက်ယောက် အသက်ရှူရပ်ပြီး သေသွားရင် ကောင်းမယ်လို့။ ဒီလောက် အလုံပိတ်အခန်းထဲမှာ လေမရ၊ အောက်စီဂျင်မရနဲ့ ကျွန်တှောအပါအဝင် လူတွေအားလုံး စိတ်ဇောတစ်ခုထဲနဲ့ ဒုကဿခကိုတောင် ဂရုမပြုနိုင်ကြဘူး။ အဲ လျှို့ဝှက်လမ်းတွေကျတော့ တစ်မျိုး။ အဲဒီလို ဖုန်းဘေလ်တွေ ဘာတွေကို ကိုယ်စား သွင်းပေးတဲ့ ဝန်ဆောင်မှုကုမဿပဏီတွေ ရှိတယ်။ သူတို့ကို တစ်လ ၁၅၀၀ လောက် ပေးရတယ်။ သူတို့ကျတော့ ဘယ်လို ပိုင်တယ် မသိဘူး။ စာအုပ်တွေ အထုပ်လိုက် ယူလာတယ်။ သူများတွေ တန်းစီတဲ့နေရာ စီစရာ မလိုဘူး။ အခန်းထဲ တိုက်ရိုက်သွားရုံပဲ။ ခဏနေတော့ ပြန်ထွက်လာတယ်။ တန်းစီနေတဲ့ ကောင်တွေက သောက်ရူးတွေလား။ ဆက်ပြောရင် ကုန်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ပဲ တခြားဘယ်အလုပ်မှ ဆက်မလုပ်နိုင်ဘဲ ပြန်ခဲ့ရတယ်။ အဲဒီအလုပ် တစ်ခါတည်း ပြီးပြတ်သွားလား ဆိုတော့လည်း မပြီးပြတ်ဘူး။ ဒီတော့ ဒေါသထွက်ရတယ်။ စိတ်ညစ်ညူးရတယ်။ အခုနကလို ဖုန်းတွေပြောလို့ ချုပ်ခြယ်ချင်တာ တားမြစ်ချင်တာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလို ဒုကဿခတွေ ကြုံရမှာစိုးလို့ ပိုက်ဆံအများကြီး ကြိုသွင်းထားတာ။ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်လက်ကိုင်ဖုန်းနဲ့ပဲ ပြောတာ။ ဒါကို မတရား ပြောကြတော့ ဒီနောက်ဆက်တွဲ ပြသဿသနာတွေကို ကိုယ်က လိုက်ရှင်းရရော။ ကိုယ့်မှာ ပိုက်ဆံ မရှိတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ဘာနဲ့ သွားသွင်းမလဲ။
တခါတလေ တချို့တွေ လုပ်လိုက်တဲ့ ကိစဿစလေး တစ်ခုဟာ သူတို့ အထင်တော့ သေးသေးလေးပဲ၊ ဒါပေမယ့် တကယ့်နောက်ဆက်တွဲ ပြသဿသနာတွေက အများကြီးရယ်။ ဘဝကြီးကို တှောတှော စိတ်ပျက်လက်ပျက် ဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်တှော မပျှောရွှင်ဘူး။ လွတ်မြောက်ရာ တစ်ခုခုကို ရှာတွေ့ချင်နေတယ်။ တစ်ရက်တစ်ရက် မွန်းကြပ်မှုတွေကြားမှာ ဘာအနုပညာမှလည်း လုပ်လို့ မရဘူး။ စိတ်ကူးလေးတွေ ထွက်လာရင်တောင် လက်က မရေးနိုင်ဘူး၊ ရေးချင်စိတ် ဖြစ်မလာဘူး။ အနုပညာမပြောနဲ့ တခြား ထမင်းစားဖို့တောင် ဘာမှ လုပ်ချင်ကိုင်ချင်စိတ် မရှိတော့ဘူး ဖြစ်နေတယ်။ စနေဂြိုဟ်များ သက်ရောက်နေသလားကွယ်။
Posted by NLS at 5/15/2009 03:05:00 PM No comments:
Posted by NLS at 5/08/2009 12:29:00 AM No comments:
ဒီနေ့မနက်က အပြင်မထွက်ခင် သတင်းစာ ရောက်လာလို့ ဖတ်ကြည့်မိတော့ ထူးထူးခြားခြား သတင်းတစ်ပုဒ်ကို သွားတွေ့တယ်။ တစ်ညလုံး အင်းလျားကန်ကြီးထဲ ရေကူးနေတဲ့ လူတစ်ယောက် အကြောင်းပါ။ မေလ ၅ရက်နေ့ ညကတည်းက ကူးလိုက်တာ ၆ရက်နေ့ မနက် ငါးနာရီမှာ အကူးရပ်သွားတော့တယ်။ တှောတှောလည်း ရေကူးနိုင်တဲ့ သူပါလားလို့ တွေးမိပါရဲ့။
ဒါနဲ့ ဟိုသတင်း ဒီသတင်းလေးတွေ လျှောက်ဖတ်ကြည့်တော့ တမတ်တန် ကြေးစည် ဆိုလား ဘာလား ဘလော့တစ်ခု သွားတွေ့ပါလေရော။ အှော တှောတှောလေးကို အရေးအသားတွေ ရုန့်ရင်းကြမ်းတမ်း နေပါပေါ့လားလို့ ပင့်သက်ချမိတယ်။ ရေးခဲ့ဖူးတဲ့ အရက်သမားတွေ နေတဲ့ရွာ ဆိုတဲ့ ကဗျာလေး သွားပြန်သတိရမိတယ်။ မီဒီယာကမ်ပိန်း လုပ်ချင်ရင်လည်း မီဒီယာရဲ့သဘော လူတွေရဲ့ သဘောသဘာဝကို နားလည်သင့်တယ်။ သူများက ဆဲတိုင်း ကိုယ်က ပြန်ဆဲနေတော့ ဒီရပ်ကွက်ထဲမယ် ကျက်သရေတုန်းတယ်။ အယူအဆ ဝါဒရေးရာ ပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ငြင်းကြပြောကြတာ တှောသေးတယ်။ အခုကတော့ တဖြေးဖြေး မိုက်ရိုင်းလာလိုက်ကြတာ မဆီမဆိုင်တဲ့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ တွေကိုပါ ပုတ်ခတ်လာကြတယ်။ ဖတ်ကြည့်တော့လည်း အားလုံးက မဲပြာပုဆိုး။ အရေးအသားတွေကလည်း ထေ့သလိုလို ငေါ့သလိုလို စောင်းသလိုလိုတောင် မကတော့ဘူး။ တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် Insult ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုး ဖြစ်နေပြီ။ ဒါမျိုးစာတွေ ဖတ်ရတာ စိတ်ပျက်ဖို့ ကောင်းတယ်။ ရပ်ကွက်ထဲ ထိုင်ဆဲနေတဲ့ အမူးသမား ကြည့်နေရသလိုပဲ။ ပညာလည်းမရဘူး။ တခါတလေတော့ ရယ်ရတာမျိုး။ ဘာပေးချင်တာလည်း ဘာပြောချင်တာလည်း ဆိုတာကို နားကို မလည်တော့ဘူး။
ငယ်ငယ်တုန်းက အမေ ဆေးတိုက်တာကို သတိရတယ်။ ရောဂါပျောက်ချင်ဇောနဲ့ ဆေးဆိုတာ နင်းကန်တိုက်လို့ စုပြုံတိုက်လို့ အတင်းတိုက်လို့ မရဘူးလေ။ ရောဂါကြီးလေ ဆေးကို ဖြေးဖြေးချင်း ကြာကြာ တိုက်ရလေ။ နင်းကန်တိုက်လိုက်ရင် ဆေးပြီးသွားတာတွေ အဆိပ်ဖြစ်တာတွေ ဖြစ်တတ်သေးတယ်။ တခါတလေ အရမ်းခါးတဲ့ ဆေးမျိုး ဆိုရင်တောင် အဲဒါလေး မသိသာအောင် အချိုလွှာလေးတွေ ဖုံးပေးထားသေးတယ်။ အထဲမှာ ခါးမှန်းတော့ သိတယ်။ ဒါပေမယ့် အဝင်မဆိုးဘူးပေါ့။ ဆရာမြသန်းတင့်သာ ရှိသေးရင် ဆေးတိုက်ခြင်း အနုပညာဆိုပြီး ရေးဦးမလား မသိ။
Posted by NLS at 5/07/2009 10:44:00 PM No comments:
အလင်းတွေ ဆောက်တည်ရာမရ ငိုက်သွားခဲ့ချိန်ကပေါ့
ငှက်ကလေးကတွေးရင်း အတောင်တွေ ချိုးချလိုက်တယ်
သူ့ကို ဖြတ်ခနဲ မြင်လိုက်ခဲ့တာပါ
ပျံသန်းသွားလိုက်တာများ ပင်လယ်ပြင်ဘက်ကို ထွက်တော့မလို
ခုတလော အရာရာဟာ ထူးထူးဆန်းဆန်း ရှိလိုက်တာတဲ့
အစဉ်အလာကို ဖောက်ထွက်ပြီး လွတ်မြောက်ခဲ့သူ
ငှက်ကလေးဟာ အတိုင်းအဆမဲ့ အတွေးတွေနဲ့
ချိုးထားတဲ့အတောင်ကို လှည့်ရင်း ပြန်ဆန့်ထွက်လိုက်တယ်
မိုးသားတွေ တလိပ်လိပ် တက်နေတဲ့ဘက်က
သူ့ကို ဖြတ်ပျံသွားတဲ့ ငှက်ကလေးတစ်ကောင်က ဟိုးအဝေးမှာ
မေမေ့စကားကို ခဏမေ့ထားပြီး တောင်ပံကို ခပ်သွက်သွက်ခတ်တယ်
လေတိုးသံဟာ တဖြေးဖြေး ပြင်းပြင်းလာတယ်
ရှင် ကျွန်မနောက် ဘာလို့ လိုက်လာတာလဲလို့ ရှေ့က ငှက်ကလေးက လှည့်မေးတယ်
ဒီလောက် လေတွေတိုက်နေတဲ့ဘက်ကို မင်းဘာသွားလုပ်တာလဲ သိချင်လို့ပေါ့လို့ သူပြန်ဖြေတယ်
လေတိုက်လို့ သစ်ရွက်တွေလှုပ်ရင် ကျွန်မ ပျှောရွှင်တာပေါ့ရှင်လို့ သူမက မခို့တရို့လေး ပြောတယ်
ပင်လယ်ရေပြင်ဟာ အပြာရောင် သန်းနေပြီ
မြင်နေကျ မိုးကုတ်စက်ဝန်းမှာ အနက်ရောင် လိုက်ကာတွေ ကျနေပြီ
မိုးတွေလည်း သည်းသည်းမည်းမည်း ရွာလို့
လျှပ်စီး မိုးကြိုးတွေလည်း မြင်နေရပြီ
ငါတို့ ပြန်ကြမလားလို့ သူမေးလိုက်တော့
ရှင်က ကြောက်တတ်လိုက်တာနှောလို့ သူမပြန်ပြောတဲ့အခါ
သူ့မာနဟာ ထောင်းခနဲ ထလာတယ်
တဟူးဟူးတိုက်နေတဲ့ လေကို အပြင်ဆန်ရင်း သူပျံတယ်
ဒီနေ့လေ ရှင်နဲ့တွေ့ရတာ ကျွန်မသိပ်ပျှောတာပဲလို့
သူ့အနားကပ်ပြီး တိုးတိုးလေး ဆိုသွားတော့
စွန့်စားသူ ကိုလံဘတ်စ်ဟာ အချစ်ကို တွေ့ခဲ့ပြီပေါ့လို့
ပျှောရွှင်မှုမှာ သူတို့ သတိမေ့သွားလိုက်တာ မိနစ်ပေါင်းများစွာ
သတိရချိန်မှာ သူတို့တစ်ကိုယ်လုံး မိုးရေတွေထဲ နစ်လို့
လေတိုက်နှုန်းမှာ သူတို့ အတောင်ပံတွေဟာ မတိုးတော့ဘူး
သူတို့ ပြန်မှ ဖြစ်တော့မယ်
နားထဲမှာ သားရေ သားရေ ဆိုတဲ့ မေမေ့ခှေါသံကို ကြားလိုက်ရသလိုပဲ
အသိတရားဟာ မုန်တိုင်းကြားထဲရောက်မှ ပှေါလာတော့တယ်
သူတို့ အတောင်တွေကို အစွမ်းကုန်ဖွင့်
လာရာလမ်းအတိုင်း ရွက်စုံလွှင့်ဖို့ ကြိုးစားရတယ်
လေသံတွေဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ရာ တရွှီးရွှီး
မိုးစက်တွေက ဓားသွားထက်ထက်တွေလို သူတို့ကို လာလာရိုက်ခတ်တယ်
သူတို့တွေ ခဏခဏ ကွဲသွားလိုက်တာများ
လေသံမိုးသံကလွဲလို့ ဘာသံမှ သူတို့ မကြားရတော့ဘူး
ကျွန်မကို ကယ်ပါဦး ဆိုတဲ့ အသံတိုးတိုးလေးတစ်ချက် ကြားလိုက်ပြီး
ကောင်မလေးဟာ လေစီးကြောင်းမှာ လွင့်ကျသွားလိုက်တာ
ငှက်ကလေးဟာ အတင်းပဲ အရိပ်ကျသွားရာဘက်ကို ထိုးစိုက်ဆင်း
ကောင်မလေးကို သူ့အတောင်နှစ်ဘက်ကြား သိုဝှက်ဖို့ ကြိုးစားရင်း
အံကိုတင်းလို့ အသက်ကို ခပ်ပြင်းပြင်း ရှူတယ်
ကျွန်မကို ပစ်မသွားပါနဲ့နှောလို့ သူမ ငိုရှိုက်ရင်း ပြောတဲ့အခါ
သူ့စိတ်မှာ အစိုးရိမ်ဆုံး အခြေအနေကို ခံစားလိုက်ရတယ်
ငါတို့ ဘယ်ကို ရောက်နေပြီလဲ
ငါတို့ ဘယ်ကို ဦးတည်နေတာလဲ
အဖေ အမေ ညီလေး ညီမလေး
ငါ့မိသားစု အသိုက်အမြုံလေး ဘယ်မှာလဲ
မုန်တိုင်းက နေရာအနှံ့ကို အပြင်းဆုံး ရိုက်ခတ်နေပြီ
သူ့မျက်ဝန်း ပိတ်ကားပြင်မှာ ပုံရိပ်တွေ ထင်လာတယ်
အဖေ အမေ ညီလေး ညီမလေး ငါ့ချစ်သူ
လှေကလေးဟာ သူ့ကို ဆိပ်ကမ်းတစ်ခုဆီ ခှေါဆောင်သွားပါလိမ့်မယ်
နောက်တစ်ခါ မေမေနဲ့ ပြန်တွေ့ခွင့် ရတဲ့အခါ
ချစ်သူနဲ့အတူ ဒူးထောက် ဆုတောင်းချင်တယ်။
ဒီကဗျာရဲ့ အစပိုင်းလေးကို ရေးဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ ဒါပေမယ့် ဆက်မရေးနိုင်ခဲ့ဘူး။ ၃ရက်နေ့ကတော့ ဒါလေးကို အပြီးရေးမယ်ဆိုပြီး ထိုင်ရေးဖြစ်တယ်။ နာဂစ်အကြောင်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတွေအတွက် ရေးဖွဲ့တဲ့ကဗျာတွေ အများကြီး ရှိပြီး ဖြစ်နေတာမို့ ကျွန်တှောက ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ကို ဇာတ်အိမ် တည်လိုက်ပါတယ်။ ပထမတော့ ဒီကဗျာကို ကိုမိုးလှိုင်ညတို့နဲ့ အတူ ကဗျာရွတ် မလို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းကြောင်းနဲ့ မရွတ်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ ကွန်ပျူတာလည်း မိုဒမ်းပျက်သွားတာမို့ အင်တာနက် မတက်နိုင်တာနဲ့ ၃ရက်နေ့မှာ မတင်နိုင်ခဲ့ဘူး။ အခုမှ တင်ဖြစ်တော့တယ်။
Posted by NLS at 5/04/2009 10:11:00 AM No comments:
Labels: Memoir, Nargis, Poem